General Biology II - Biol 222 - Jimma College of Teachers Education
Koorsii: Bayoloojii Waliigalaa II
Lakkoofsa Koorsii: Biol. 222
Kireeditii /Credit Hour/: 3
Yeroo walargaa/contact hours: Sa’atii 7 (4 lekcharii fuulafulaan, Lab. Sa’atii 3/ torbeetti)
Kan kennamuuf: Baarattota Saayinsii Walsimataa Dippiloomaa (Kutaalee5-6f)
Koorsiin kuni matadureewwan siilabasii kutaa 11-12 keessaa filataman kan hammatu fi akka ce’umsaatti kan fudhatame dha. Koorsii kana keessatti, boqonnaan tokko prinsipilootaa fi sadarkaalee goseessaa hammata. Boqonnaan lama waa’ee baayoloojii Namaa ta’ee as keessatti faayidaalee sirna qaamaa irraatti kan xiyyeeffatu dha. Boqonnaan sadii waa’ee fayyaa fi dhukkubaa kan jireenya miidhu ilaallata
Koorsiin kuni itti dabalees, adeemsa baruu-barsiisuu keessatti barattootni mala rakkoo hiikuu akka dagaagfataniif gochaaleen adda addaa /practical activities/ kennamanii jiru. Dalagaaleen Laboraatorii yeroo fi seemisteera kenname keessatti xumuramuu qabu. Dabalataanis baratootaaf, qajeelfamoonni adeemsaa (procedures), mateeriyaalotaa fi gaaffileen shaakalaa gareen ykn dhunfaan kan kennaman ta’u.
Barbaachusummaa ramaddii ni himu.
Sanyii, sirna moggaasa maqalamee fi maalummaa maqaa saayinsawaa ni ibsu.
Fakkeenyawwan maqaa saayinsaawwaa barreessuu ni danda’u.
Biqilootaa fi bineeldota , nama dabalatee, bu’uura gareewwan ramaddii isaaniitiin ni ramadu.
Dalagaalee sirna bulleessuu soorataa tarreessu, fakkii sirna bulleessuu soorataa kaasuun
Caasaalee sirna hargansuu namaa adda baasuun dalagaa isaanii tareessu;
Dhukkuboota sirna hargansuu (aneemiya fi dhiibbaa dhiigaa) tarreessuun ibsu.
Caasaa fi dalaga sirna neervii addda baafatu;
Garaagarummaa xannachoota indookiraayinii fi eksookiraayinii hubatu;
Caasaalee adeemsa usaansaa keessatti hirmaatan tarreessuun ibsu.
BOQONNAA 1: RAMADDII LUBBU QBEEYYII
Biqilootaa fi bineeldota Nama dabalatee, bu’uura gareewwan ramaddii isaaniitiin ni ramadu.
Amaloota ittiin beekaman irraatti hundaa’uun mootummoota moneeraa, pirotiistaa, fangasootaa, biqilootaafi bineeldotaa gargar ni baasu.
Bidoollee, soorannoo, walhormaataafi barbaachisummaa orgaanizimoota mootummoota moneeraa, pirotiistaa, fangasootaa, biqilootaafi bineeldotaa bakka bu’oo ta’an jechaan ni ibsu.
1. Ramaddii lubbuqabeeyyii
Ramaddiin lubbuqabeeyyii bu’uura amala waliin qaban irratti hundaa’uun lubbuqabeeyyii walfakkaatan walitti garteessuu dha. Dameen barnoota baayoloojii waa’ee ramaddii qo’atu taaksonoomii jedhama. Lubbuqabeeyyii walitti garteessanii ramaduun maaliif barbaachise? Sababnisaa lubbuqabeeyyiin addunyaa kana irratti argaman lakkoofsaafi akaakuun danuu dha. Tilmaami saayinsaawwaan as dhiyoo ta’e akka agarsiisutti sanyiwwan lubbuqabeeyyii miliyoona sagalitti siqanii argaman keessaa miliyoonni 6.5 lafa irra jireeyyiifi miliyoonni 2.2 immoo bishaan keessa jireeyyiidha. Kanneen keessaa miliyoonni 1.5 qoratamanii addaan baafamaniiru. Waggaa waggaan kanneen dabalataan adda baafamuun itti dabalamanis kumaatamaan lakkaa’amu. Kanaaf sanyiwwan lubbuqabeeyyii heddummatoo kana qorachuuf falli saayintsistootaaf salphaa ta’e lubbuqabeeyyii walfakkaatoo gartuutti ramaduun itti dabalaa adeemuudha. Ramaddiin lubbuqabeeyyii ofiisaatii pirinsippiloota hordofee garee guddaa gara garee xixiqqaatti qoodu ni qaba. Fakkeenyaaf caasaa alaafi keessa nafaa, walhormaata, sochii, dalagaa caasaa qaamaa, qabiyyee baayookeemikaala nafaa, kkf, irratti hundaa’a.
1.1. Pirinsippiloota ramaddii
Ramaddiin lubbuqabeeyyii yommuu gaggeeffamu seeraa fi sirna mataasaa hordofee adeemsifamu qaba. Mataduree kana jalatti xiyyeeffannaan itti kennamee kan ilaallus pirinsippiloota kanneefi
sirnawwan ramaddii garaagaraa dha. Sirna ramaddii lubbuqabeeyyii keessatti pirinsippiloonni bu’uuraa keessaa muraasni:
1. Ulaagaa qorannaa caasaa ala qaamaa (morphological criteria):
Amalawwan ala caasaa qaama lubbuqabeeyyii hedduu fayyadamuun ramaddii gaggeessuun daran bu’a qabeessaa dha. Ramaddii biqilootaa keessatti caasaa alaatiin kanneen walfakkaatan walitti garteessuu dandeessisa. Haaluma kanaan hariirowwan gidduu biqilotaa fi garaagarummaan caasaa alaa irratti mul’atuun biqiloota addaan baasuun ni danda’ama. Gareen biqilootaa garaagarummaa hedduun gidduu isaaniitti argamu akka walitti firoomoo hin taanetti ykn wal irraa fagaatanii firoomoo akka ta’anitti fudhatamu. Fakkeenyawwan caasaa morfoloojii boca sanyiifi, baala, dheerina hojjaa, teessuma habaaboo, halluu habaaboo, kkf eeruun ni danda’ama.
Shaakala 1.1 : Fakkeenyawwan caasaa morfoloojawaa biroo terreessi!
2. Seenaa jijjiirama suuta suutaa (Phylogenetic considerations):
Duraaduubummaa jijjiirama suuta suutaa keessatti gurmaa’ina gareewwanii jiru kan bu’uura godhate dha. Dabalataan walfakkeenyawwan gama amala dhaalaa (genetic)tiin jirus kan calaqqisiisu dha. Garuu, seenaan jijjiirama suuta suutaa lubbuqabeeyyii gargar ciccitaafi hanquu waan ta’uu danda’uuf yeroo ammaa kana sirna ramaddii uumamaa waliin wal-utubsiisuun ittiin hojjetama. As keessatti wanti hubatamuu qabu taaksonoomii ammayyaa keessatti ramaddiin yammuu taasifamu odeeffannoon birkiwwan garaagaraa (amala dhaalaa, saayitoloojii, ikkoloojii, taaksonoomii keemikaalaa, fi taaksonoomii lakkoofsaa) irraa walitti qabama.
Keemikaala taaksonoomii (Chemotaxonomy):
Damee beekumsaa yeroo dhihoo hojii irra oole ta’ee, jiraachuufi facaatii keemikaala walmakoo adda addaa biqiloota keessatti argaman ramaddiif gargaaramuudha. Gartuuwwan keemikaala walmakoon gara soddomii sadiitti dhiyaatantu ramaddii lubbuqabeeyyii raawwachuuf barbaachisoo ta’anii argamu.
Shaakala 1.3 Gartuuwwan keemikaala walmakoowwanii soddomii sadan maalfaadha?
4. Taaksonoomii lakkoofsaa (Numerical taxonomy):
Tooftaa ramaddii odeeffannoo lakkoofsa caasalee organizimii gargaaramuun raawwatudha. Amalawwan taaksonomawaa kutaalee biqilootaa, sadarkaa marsaa jireenyaa irraa fudhataman fayyadama. Odeeffannoon gartuuwwan biqiloota adda addaaf funaaname sirnaan qindeessuun ramaddii gageessuu dha.
Pirinsippiloota ramaddii wajjin wantootni miiltoo ta’an sirnotni ramadiin biroon ni jiru. Isaaanis:
Sirna ramaddii namtolchee
Sirna ramaddii uumamaa
Sirna ramaddii hidda dhalootaa
Sirna ramaddii fenetiksiifi
Sirna ramaddii Kilaadistiksii dha.
i. Sirna ramaddii namtolchee
Sirni kuni orgaaniziimoota ramaduuf amala tokko /muraasa/ filatamanitti kan gargaaramu dha. As keessatti filannoon amalootaa, yeroo hedduu ramaddii dursee gaggeeffama. Amala addaan baatee tokko waliin qabaachuun tuuta lubbuqabeeyyii walitti garteessuuf ga’aa dha waan ta’eef sirni kun monoozetikii jedhama. Bineeldoti dandeettii balali’uutiin iddoo lamatti qoodamu. Isaanis bineeldota balali’anii fi bineeldota balali’uu hin dandeenye jedhamuun kaa’amau. kana keessatti bineeldota walitti hin firoomnetu walitti garteeffama. Fkn. Billaacha, simbira halkanii fi allaattiwwan. Asirratti wanti hubatamuu qabu billaachi gita ilbiisaatti firoomti, simbirri halkanii gita hoosftootaa jalatti hammatamuu ishee dha. Sirni ramaddii namtolcheen itti dabalataan biqiloota bu’uura hojjaa ykn dheerina qaban qofaan saaxoo (herbs), saaxoo olgaalamee (shrubs), hiddaa (climbers) fi mukeen (trees) jechuudhaan garteessee ramada. Karaa biraa bineeldota lafarra fi bishaan keessa jireeyyii, ilmaan dhalaniifi hanqaaquu buusan,kkf jechuun ramada.
Hanqinoota sirni ramaddii nam-tolchee:
Hariiroo uumamaan lubbuqabeeyyii gidduu jiru irratti hin bu’uurffatu,
Lubbuqabeeyyii firooma hin qabne walitti gurmeessa.
Amaloota barbaachisoo hubannaa keessa kan hin galchinee fi barbaachissummaa jijjiirama suuta suutaa kan hin ibsinee dha. Lubbuqabeeyyii beekaman ramaduuf ykn garteessuuf quubsaa miti.
ii. Sirna ramaddii uumamaa
Sirni ramaddii uumamaa walfakkeenya amalootaa irratti kan bu’uureffatee dha. Sadarkaa ramaddii keessatti bakki lubbuqabeessi qabatu odeeffannoo hedduu waa’ee lubbuqabeessichaa kan dabarsu dha. Akka sirna kanaatti lubbuqabeeyyiin lakkofsa amalaootai olaanaa walfakkaatu waliin qaban sanyii tokko jalatti ramadamu. Kanaaf sirnichi pooliizetikii jedhama. Ramaddii lubbuqabeeyyii amalootaa lakkoofsa hedduu irratti bu’uureffachuun kan raawwatamu dha.
Amalaoota ramaddii uumamaa keessatti qorataman muraaasni isaanii: Caasaalee alaa, keessaa, caasaalee seelii, dalagaa qaamaa, dagaagina miciree walhormaata, baayookeemistirii, kkf yaada keessa galfamu.
Ijaarsa caasaalee yoo biratti ilaalaman walfakkaatanii, fakkeenyaaf gurmaa’ina lafee koochoo simbira halkanii, dolfiinii fi harka namaa. Qaamoleen dagaagina kalqaatiin tokko ta’an daandii jijjiirama suuta suutaa ittiin argamaniin tokkummaa qabu jedhamee yaadama. Qaamoleen akkasii kun caasaalee hoomoologosii jedhama. Caasaaleen hoomoologosii ta’an dalagaa tokko ykn kan garaagaraa raawwachuu dhaaf boceessaman.
walfakkeenyi moliikiwulota DNA, RNA fi pirootinootaa yammuu biratti ilaalaman hariiroo lubbuqabeeyyii gidduu jiru bu’uuressuuf gargaaru. Fkn kiromoosomooti ykn dhaalaa sanyii namaa fi jaldeessaa yeroo toora qabsiifaman walfakkaatoo dha.
Keemootaaksonoomiin hariiroo gartuu gooree gidduu jiru bu’uuressuu dhaaf gargaara. Fkn beetaasiyaaniniin (betacyanin) halluu diimaa bulbulamuu danda’u hundee diimaa keessatti argamu dha. Biqilaan halluu kana qabeessa ta’e marti oorderii hundee diimaa jalatti garteeffamu.
iii. Sirna ramaddii hidda dhalootaa (Phyletic)
Kaayyoon sirna ramaddii kanaa tartiiba uumama lubbuqabeeyyii, amaloota duubatti hafoo (least specialized) qabu irraa eegaluu fi gartuu dagaagina olaanaa qabeessa akka ittiin xumuraatti fudhatame ijaaruu dha. Tokko tokkoon taaksoonii adeemsa daayiversifikkeessuu ykn wal irraa latiinsaa (Fak. 1.1) akaakilee (ancestor) tokko irraa akka dhufan mirkaneessuu yaala.
Hayyoonni ramaddii ammayyaa lubbuqabeeyyii akka ilaalanitti, hariiroon uumamaa lubbuqabeeyyii gidduu jiru firii adeemsa dheeraa jijjiirama suuta suutaadha jedhu. Yeroo dheeraa keessatti Sanyiin jijjiirama suuta suutaa irraa kan ka’e geeddaramee sanyii haaraa akka uumamu godha. Lubbuqabeeyyiin akaakilee tokko irraa dhufan jedhee waan amanuuf lubbuqabeeyyiin walfakkaatu amantaa jedhutu jira
Fak. 1.1 . Hidda latiinsa dhalootaa biqiloota magariisaa.
Hariiroon jijjiirama suuta suutaa lubbuqabeeyyii, har’a taaksonoomii dhaaf bu’uura dha. Seenaan jijjiirama suuta suutaa gartuun luubbuqabeeyyii gooree tokkoo faayiloojenii (phylogeny) jedhama. Ramaddiin hariirowwan faayiloojenetikii bu’uura ramaddii jijjiirama suuta suutaa jedhamee beekama. Hariiroowwan jijjiirama suuta suutaa argachuu dhaaf hayyoonni taaksonoomii ragaalee gosa adda addaatti gargaaramu. Garuu kun yeroo hunda hin milkaa’u. Sababnisaas galmee hambaa lubbuqabeeyyii sanyii bara durii jiraatan guutuutti argachuun rakkisaa waan ta’uuf dha.
iv. Sirna ramaddii fenetiksii
Ramaddii amaloota hedduu walqixaa irratti kan bu’uureffatee fi amaloota waldorgomsiisuun ramaddii gageessa. Jechi fenetikii (phenetic) jedhamu yeroo jalqabaaf bara 1960tti hayyoota Ka’in fi Harrisoon jedhamaniin beeksifame. Hiikaansaas hariiroo walfakkeenya waliigalaa bu’uura amaloota mara jiraniin madaalamuu dha.
v. Sirna ramaddii Kilaadistiksii
Kilaadistiksiin yaadarimeewwanii fi tooftaalee birkii daandii jijjiirama suuta suutaa murteessuuf gargaaru dha. Sirna ramaddii kanaan xiyyeeffannoo guddaan kan itti kenname gargarbaasuu amala duubatti hafaa fi dagaagaa dha.
1.1.1. Seenaa Taaksonoomii
Seenaan jalqaba taaksonoomii uumamuu qooqa ilma namaa waliin walqabataa dha. Ilmi namaa bara durii biqiloota nyaataafi dawwaaf olaniifi kanneen namafi bineeldota birootti summii fi miti summii, kanneen foonsaanii nyatamaniifi kanneen hin nyaatamne, kkf irratti qooqaan walii galuu yeroo jalqabee kaasee odeeffannoo waliif laachaa ture. Ramaddiin haala kanaan namootni itti fayyadamaa turan taaksonoomii sabaa /uummataa (Folk Taxonomy) jedhama.
Daandii armaan olitti ilaaluu yaalame irratti dabalataan seenaan taaksonoomii beekamu namicha “abbaa taaksonoomii” jedhamee waamamu, bootaanistii biyya Siwediin Kaarl Liinas (Carolus Linnaeus, 1707-1778) marsanii wayitiiwwan akka furtuutti ilaalaman waliin qabsiifamee bakka sadiitti hirama. Wayitiiwwan kanneenis dura- Liinas, Liinas fi booda- Liinas jedhamanii gargarbaafamu.
Yeroon Dura-Liinas waggota 3000 dhaloota Kiristoos dura (DhKD) ture. Namootni hedduun yaadrimee madda taaksonoomii aadaa warra Roomaa fi Girikii waliin walqabsiisuun ibsuuf akka yaalan miti. Taaksonoomiin inni duraa ka’umsisaa addunyaa bahaa keessatti Chaayinaa akka ta’e ragaan saayinsii ifa godhee jira. Fakkeenyaaf ragaan barreeffamaa mootii Chaayinaa Sheen Nuung (3000 DhKD) waanqabatee argame, qorichoota biqiloota, albudaafi bineelda irraa argaman 365 ture. Biyya Misir keessatti immoo naannoo bara 1500 DhKD biqiloonni madda dawwaa dibaa keenyanii irratti agarsiifamanii turan. Dabalataani barreefami maramaan (papyrus rolls) biqiloota wallaansa dhibee garaagaraatiif oolan ramaddii isaanii qabatee argameera.
Aristootel bara 384-322 DhKD hawaasa gara dhiyaa Girikiifi Roomaa keessaa kan ture, lubbuqabeeyyii hundaa kitaaba “Historia animalium” ramadee agarsiise. Fakkeenyaaf bineeldita dhiiga qabeeyyiifi dhiiga dhabeeyyii, bineeldota bishaan keessafi lafarra jireeyyii.
Shaakala 1.7 Sirni ramaddii Aristootel hanqina maal qabature? Hayyooti biroon wayitii Dura- Liine’aanii jedhamu keessatti beekamoofi bu’aan isaan dagaagina taaksonoomiif godhan kitaaba wabii biroo irraa dubbisuun gabaasa dareef dhiyeessaa!
Liinas (1707-1778) – Liinas taaksonoomistii fi ogeessa fayyaa biyya Siwediin, akkasumas
bu’uuressaa taaksonoomii ammayyaa kan biqilootaa fi bineeldotaa ture. Sirni moggaasaa maqa kan har’a ittiin hojjetamukan Liinas dha. Gumaachisaa inni guddaan barreeffama sirnawwan ramaddii biqilootaa fi bineeldota jaarraa 18ffaa taaksonoomistoota jalaa waldhahaa turan toora qabsiisuusaasaa ture. Kitaabaalee fi barreeffamoota biroo hedduu maxxanse. Sirnisaa inni jalqabaa bara 1735tti kitaaba ‘Systema Naturae’ jedhamu keessatti maxxansame. Hojiin maxxansicha keessatti hammatames tooftaa walee sirna ramaddii bineeldotaa, biqilootaa fi albudootaa baramoo keessatti tajaajilu kan agarsiise ture.
Bu’aan sirna ramaddii Liinas lubbuqabeeyyii riqaawwan (Gulantaawwan) torba irratti sadarkeessuufi moggaasa maqalamee Airstooteliin hiikamee ture addunyaa ramaddii biqilootaafi bineeldotaa keessatti hojii irra oolchuu dha. Kanas riqaa olaanaa irraa gara gadiitti namaafi biqilaa daangullee (Gabaatee 1.1) keessaa fakkeenya fudhachuun ni danda’ama. Riqaa sanyii irra kan taa’ee jiru maq-lamee ykn maqaa saayinsaawaa dha.
Shaakala 1.8 barattootaa leenca, fardaafi biqilaa hoomii fudhadhaatii riqaa olii irraa gara gadiitti haala gabatee 1.1 keessatti agarsiifameen kitaaba biroo irra barbaadaatii agarsiisaa!
Gabatee 1.1. Riqaa ramaddii dhala namaafi biqilaa daangulee balleessaa irraa gara gooreetti taa’e.
Riqaa Nama Daangulee
Mootummaa Bineela Biqilaa
Murna Kordaataa Manyooliyofaayitaa
Gita Hoosiftoota Manyoliyoopsiidaa
Oorderii Piraayimeetii Faabaalesii
Murna Hominidee Faabaasee
Qaccee Homo Pisum
Sanyii Homo sapiens Pisum sativum
Sirna Ramaddii Liinaasiin Boodaa – sirni ramaddii yeroo amma Taaksonomistootni fayyadaman hedduun isaa hojii Liinaasii hojjete dha. Ta’us garuu yeroo sanaa asitti ramaddii ilaalchisee sirna ramaddii Liinasirratti yaadawwan dabalataan hammataman ni jiru. Ceephowwan diriiran keessa tokko kan ta’e Liinas lubbuqabeeyyii gartuutti qooduuf ala nafaa irratti wantoota daawwataman; dabbasaa, rifeensa, lukawwan 4fi kkf qabaachuu ykn dhabuu irratti xiyyeeffataa ta’uusaa dha. Saayintistooti garaagaraa sirna ramaddii Liinas sakatta’anii qorachuudhaan yaada fooyya’aa itti dabaluun lafa kaa’anii jiru. Kanneen keessaa muraasa fudhachuun ni danda’ama.
Je’oorji-Luu’isi Lesilersi dii Buffoon (1707-1788) yaadahiddama sanyiin lubbuqabeeyyii sanyii xiqqaafi amala dhaalaa sanyii keessatti dagaagifatan ibse. Hojiin hayyuu kanaa gabatee bu’uuraa baayoloojiin jijjiirama suuta suutaa irra dhaabate ta’e.
Antooyinee Laa’urent dii Juussiwuu (1748-1736) sirna ramaddi Liinas bara 1789 kitaaba “Genera Plantarum” jedhu keessatti barreessee ture fooyyesse. Sirna ramaddii uumamaa amalawwan hedduu biqilootaa irratti hundaa’eefi sirnawwan ramaddii ammayyaa har’aa keessatti tajaajilan beeksise. Biqiloota akoteliidoanoota, koteliidan-tokkeefi koteliidan- lamee jedhee ramaduun nama jalqabaa ture. Sirna riqaa ramaddii Liinas keessatti riqaa qacceefi gita gidduu, murna irraa gara warra jedhamuutti jijjiire.
Laamaarki (1744-1829) yaadahiddamaa saayinsii jijjiirama suuta suutaa amalawwan dhaalaa sanyii gidduu hammatamu dagaagse.
Chaarliis Daarwiinii (1809-1882)fi yaadahiddamaa saayinsii jijjiirama suuta suutaa. Laamaarkifi dii Buffooniin waa’een saayinsii jijjiirama suuta suutaa kan dhiyaate ta’ullee,
guutummaatti sakatta’iinsi hin godhamne hamma Daarwiiniifi Alfireed Russel Wallaasi (1823-1913). Yaada hidda dhalootaa, “phylogeny” kan hundeesses Haa’eekel nama jedhamu ture.
Wiillii Henniig (1913-1976 )fi kalaadistiksi: sirna ramaddii haaraa kalaadistiksii ykn maqamoggaassa faayiloojenetikii jedhamu bara 1966tti hundeesse. Sirni kun caalmaatti kaayyeffataa ykn loogii irraa walabadha. Amalawwan walfakkaatoo hedduu kanneen waliin qaban akaakilee tokko irraa akka dhufanitti yaadamu dha(Fak 1.2 ).
Shaakala 1.9 1. Sirni ramaddii kalaadistiksii ulaagaa maalii irratti hundaa’ee ramaddii lubbuqabeeyyii geggeessa?
2. Baayookemistiriifi jiiniin lubbuqabeeyyii ramaddii keessatti shora attamii qabaatu?
1.1.2 Yaadrimee sanyii
Joohin Raay (1627-1705) yeroo jalqabaaf hayyuu qacceefi sanyii gargar baasee ibse dha. Haata’u malee, yaadrimee morfoloojii sanyii yeroo jalqabaaf ibsa kan kenne Lina’aas (1707-1778) ture. Itti aansee immoo Daarwiin yaadrimee sanyii lubbuqabeesa wixineesaa dhiyeessee jennaan, Erinest Maayir immoo yaadicha gabbise. Yaadrimee morfoloojii sanyii garee lubbuqabeeyyii dhuunfaa amaloota caasaa alaa gurguddoo walfakkaatan qabeeyyii dha. Yaadrimee sanyii lubbuqabeeyyii immoo yaadrimee morfolooj irratti ikkoloojii, ji’ogiraafii, saayitoloojii, fiziwoloojii, amala fi kkf dabalataan kan of keessatti hammatu dha.
Akka yaadrimee sanyii lubbu qabeeyyitti , sanyii jechuun garee lubbuqabeeyyii dhuunfaa tokko tokkoon isaanii gama morfoloojii, fiiziwoloojii, baayookemikaalaa, fi amaloota gochaan agarsiisaniin walfakkaatoo dha. Haala uumamaan jiru keessatti wal irraa horuuf kanneeen danda’a dha. Garuu miseensota sanyii biroo waliin walhoruuf milkaa’oo miti. Kanaaf, sanyiin garee lubbuqabeeyyii
ilmaan wal irraa argachuu danda’aniifi ilmaan isaaniis itti fufiinsaan giddii isaaniitti walhoruuf ga’umsa qabeeyyii dha. Sanyiin sirna ramaddii keessatti yuuniitii bu’uuraafi xiqqaa sirnichaa dha Dimshaashumatti sanyiin hiikaa garaagaraa qaba. Hiikaa adda addaa jiran keessaa kanneen armaan gadditti eeraman yoo ilaalle:
Sanyiin yuuniitii bu’uura ramaddii dha.
Kaategorii bu’uurawaa riqaa (rank) ramaddii ti.
Dhagaa ijaarsaa ramaddii lubbuqabeessa yaad- rimeewwan gartuulee olaanaa fi gadaanaan irraa dagaagani dha.
Kaategorii gadaanaa riqaa keessaa dhaabbataa dhaan kan fayyaduu fi namoota addunyaa maraan hubatamu dha.
Yuuniitota bu’uura jijjiirama suuta suutawaa ramaddii ti.
Yaadrimeewwan sanyii shantu beekamu. Kanneen kunis armaan gaditti ibsamanii argamu.
Shaakala 1.10 yaadrimeewwan olitti tarreeffaman keessaa yaada Lina’aasfi Daarwiin duukaa kan waliif galu kam?
Yaadrimee sanyii taaksonoomiwaa/ramaddii/ – walitti qabama lubbuqabeeyyii akaakuu tokkoo morfoloojiin kan walfakkaatanii, walitti qabama akkasii biroo irraa adda ta’an dha. Amalooti morfoloojii yaadrimee kanaaf wiirtuu dha.
Yaadrimee sanyii baayoloojawaa – lubbuqabeeyyii miseensota dhuunfaatti baatoo amaloota dhaalaa (genes) waljijjiiruu danda’ani dha. Jiinoota bilisaan walmakanii fi ilmaan itti fufiinsaan waliin godhachuuf ga’umsa qabeeyyii dha.
Yaadrimee sanyii daddabaarawaa – miseensota daandii uumamaa tokko qabeeyyii, yeroo adda addaa jiraatanii fi amaloota adda addaakan qaban dha. Sarara gargar qoodaa sanyii daddabarawaa kaa’uun haata’uu (arbitrary) dhaan kan godhamu dha. Raawwii irratti garuu banaa galmee hambaa keessaatu gargaara.
Yaadrimee sanyii sanyii xixinnaa (microspecies) – uummata morfoloojiin /bifa walfakkaataa (uniform) qabeessa, hamma xinnaadhaan immoo uummattoota bifaan walfakkaatoo firoomoo irraa adda ta’ee dha. Yeroo baay’ee maxiiqessuun kanneen uumaman dha. Morfoloojii dhaan garaagarummaa muraasa gidduusaaniitti agarsiisu ykn uummattoota irra jireessaan wartokkee (uniparental) gartuulee biqilaa gidduusaaniitti bifa walfakkaataa fi morfoloojii dhaan garaagarummaa muraasa gidduusaaniitti agarsiisani dha.
Yaadrimee sanyii baayoosistemaatikii (Biosystematic) – kanneen kun gartuulee biqilaa saalessaa, ooyiruuwwan yaalii irratti gocha namtolchee dhaan diqaalessamanii argaman dha.
1.1.3. Moggaasa maq-lamee
Moggaasni maqaa saayinsawwaa meeshaa namootni qorannaa dhimma biqilootaa fi bineeldotaa geggeessan waliindhahamuu tokko malee itti gargaaramuuf waliigaltee irra ga’ani dha. Moggaasa maqaa (Nomenclature) jechi jedhu jecha Laatinii “Noomenkileecheraa” jedhu irraa dhufe. Noomenkileecheraa, jechuun sirna moggaasa maqaa jechuu dha. Kanaaf baayooloojii keessatti moggaasa maqaa jechuun lubbuqabeessaaf maqaa kennuu jechuu dha.
Yeroo jalqabaaf moggaasa maqaa yaadasaa kan dhiheessee hojii irra oolche Liina’aas ture. Sirni Liina’aas bara 1753 kitaabasaa “Species Plantarum” keessatti diriirse kunis moggaasa maqalamee jedhama. Sirna kana keessatti lubbuqabeeyyiin sanyii tokkoo jechoota lamaan moggaafamu. Jechi inni jalqabaa maqaa qaccee, inni lammaffaan immoo maqaa sanyii dha. Tokko tokkoon gosa lubbuqabeessaaf maqaa cimdii ykn lama walitti waamamutu kennamaaf. Sirni kun kitaaba hayyuu kanaan barreefame ‘Systema Nachurae’ jedhu keessatti Ammajjii 1, 1758tti maxxansame. Ergasii eegalee hamma har’aatti addunyaa guutummaa keessatti fudhatama argatee jira.
Faayidaan maqaa inni guddaan akka meeshaa ittiin waliigalteetti tajaajiluu fi kanneen itti fayyadaman mara biratti hubatamuu fi hiikaa tokko qabeessa ta’uu qaba. Kanafuu, pirinsippiliin bu’uuraa moggaasaa maqaa dha.
Lubbuqabeeyyiif moggaasa maqalamee kennuun maalif barbaachi yoo jedhame:
Lubbuqabeeyyii walfakkaatan bakka tokkotti gurmeessuu fi waa’ee isaanii qorachuuf
Saayintistooti addunyaa kan irratti waliigalan maqaa lubbuqabeeyyii uumuuf.
Biyya adda addaatti maqaan tokko lubbuqabeeyyii hedduuf ykn maqaa hedduun lubbuqabeessa tokkoof ni moggaafama. Maqaa saayinsawaan bu’uura ramaddiitiin kennamu rakkoo kana hambisa.
Pirinsippilootni moggaasa maqalamee keessatti eegamuu qaban :
Moggaasni maqaa saayinsawaa tokko tokkoon sanyiif kennamu maq-lamee dha. Kunis kutaa lama qaba. Kutaan jalqabaa maqaa qaccee, inni lammaffaan immoo maqaa sanyii dha. Fkn maqaa saayinsawaa namaa yoo fudhanne ‘Homo sapiens’ dha. ‘Homo’n maqaa qaccee fi ‘sapiens’ immoo maqaa sanyii dha.
Maqaan qaccee yeroo hunda qubee guddaa dhaan eegala. Kan sanyii garuu qubee xiqqoo dhaan barreeffama. Maqaan saayinsawaa yeroo barreefamu maxxansa keessatti yoo ta’e itaaliksii godhama. Fkn ‘Mangifera indica’- maqaa saayinsawaa maangoo ti. Barreefama harkaa keessatti immoo itaaliksii gochuun waan hin danda’amneef qopha qophaatti jala sararama. Fkn: Canis familaris = Maqaa saree
1.1.4. Sadarkaalee riqaa ramaddii
Ramaddii lubbuqabeeyyii keessatti riqaa ramaddii ilaaluudhaaf, garaagarummaa “taxon/taxa”fi “category” gidduu jiru adda baasuun barbaachisaa dha. Taaksooniin sirna ramaddii keessatti garee taaksonomiii sadarkaa riqaa kamii irra illee jiru dha. Garee taaksonomiwaa bal’aa akka murnaa ykn dhiphaa akka sanyii ta’uu ni danda’a.
Kaategoriin immoo sirna ramaddii keessatti riqaawwan gooree taaksaan adda addaa irratti hamatamanidha. Tokko tokkoon riqaa kun kaategorii taaksonoomii jedhama. Innis hariiroo gooree lubbuqabeeyyii gidduu jiru agarsiifamuf kan oolu ta’ee, kaategoriiwwan torbatu beekamu. Lubbuqabeeyyii bifa qindooma qabuun walitti fidanii kaategoriiwwan taaksonoomiidhaan tartiibessuun riqaa ykn gadbu’a ramaddii (taxonomic hierarchy) jedhama. Sirni riqaa ramaddii irra keessaa gara gadiitti tartiiba dirqamaa kaategoriiwwan torbaa hammata.
Maxxantuu duraa olaanaa (super) ykn xiqqa (sub) jedhu gargaaramuu dhaan kaategorii dura ykn booda kaa’uun agarsiisuun ni danda’ama. Fkn gita olaanaa, gita xiqqaa, oorderii olaanaa, oorderii xiqqaa, warra xiqqaa, kkf. Kaategorii taaksonoomiwaa kanneen armaan olii tokko tokkoon yooqaacessine:
Mootummaa– kaategorii olaanaa fi kanneen hafan mara of jalatti hammata (Fak. 1.3). Sanyiin immoo kaategorii isa xinnaa dha. Inni olaanaan bal’ina qabeessa. Innni xinnoon immoo gooree fi lubbu qabeessa qabatamaa ibsa. Wanti qabatamaan kaategorii keessatti agarsiifamu kun taaksoonii dha.
Fak. 1.3. Walhammannaa riqaawwan ramaddii turban.
Sanyii-bu’uura taaksonoomii qofa miti, garuu bu’uura jijjiirama suuta suutaa dhas. Akkuma olitti eerame kaategorii taaksonoomiwaa xinnicha dha. Maqaa saayinsaawaa dhaan beekama. Fakkeenya (Gabatee 1. 2) keessaa ilaali.
Gabatee 1.2. Moggaasa baramaa fi maqaa saayinsawaa lubbqabiiyyii muraasaa
Moggaasa baramaa Maqaa saayinsawaa
Leenca Panthera leo
Abbayyii Measa lanceolata
Birbirsa Podocarpus falcatus
Waddeessa Cordia Africana
Qaccee-sanyiwwan dhiheenyaan walitti firoomoo ta’an kan ittiin waamaman dha. Sanyiwwan qaccee tokko jala jiran abaabee tokko irraa dhufan ykn dagaagan jedhamee tilmaamama. Qaccee ‘Panthera’ fi ‘Maytenus’ (Gabatee 1. 2) keessaa ilaali.
Gabatee 1.3. Sanyiwwan qaccee tokko jalatti hammataman
Iyyaa Panthera pardus
Qeerransa Panthera tigris
Kombolcha Maytenus buchananii
Hacaacii Maytenus gracilipes subsp. arguta
Leenca, Iyyaa fi Qeerransi qaccee tokko jalatti hammatamu. Gama biraadhaan sanyiwwan kombolchaa shantu qaccee tokko jalatti agarsiifamee jira.
Warra– qaccewwan firoomoo ta’an walitti warra tokko jalatti waamamu. Qacceen ‘Panthera’ fi ‘Felis’ ga’umsa waliinii hedduu qabu waan ta’eef warra ‘Felidae’ jalatti waamamu. Warri ‘Felidae’ (warri adurree) immoo warra ‘Canidae’ warra Saree irraa addummaa qabu.
Oorderii– warrawwan firoomoo dha. Warri ‘Felidae’ fi warri ‘Canidae’ oorderii Kaarniivoraa jalatti waamamu.
Gita– Oorderiin firoomoo dha. Oorderiin Kaarniivoraa (leenca, saree, adurree) fi oorderii piraayimatisii (nama, gorillaa, jaldeessa, qamalee) gita hoosiftootaa jalatti hammatamu.
Murna– gitawwan firoomoo dha. Giti qurxummiilee, afiibiyaanii, reptaayilootaa, allaattiwwanii, fi hoosiftootaa murna kordaataa jalatti ramadamu.
1.2. Ramaddii Mootummaawwan shaman
Mootummaan lubbuqabeeyyii bu’uuraan yammuu ilaalamu sadarkaa har’a irra ga’e kana biraga’uudhaaf bu’aa bayii hedduu keessa darbee jira. Beekumsa waa’ee lubbuqabeeyyii mootummaatti Isaanis:
a) Yaadrimee mootummaa lamaa
Bu’uurri yaada rime ramaddii kanaa lubbuqabeeyyii maraa mootummoota biqilootaa fi mootummaa bineeldotaa lama jalatti qooduu dha. Bu’uurri garaagarummaa isaaniis jiraachuu ykn dhibuu cichaa seelii ti. Cichaa seelii kan qaban marti mootummaa biqilaa jalatti hammatamu. Mootummaan biqilaa of jallatti baakteeriyeemota, fangasoota, saaphaphoota fi biqiloota dachee hammata. Kanneen jalqabaa sadan akka miseensota mootummaa xiqqaa Taalofaayitaa/Taalobaayontaatti fudhatamoo fi gareen biqiloota dachee immoo akka miseensa Imbiriyoofaayitaa/ Imbiriyobaayontaatti ilaalamu.
Taalofaayitaan wantoota ittiin beekaman ni qabu. Kanneenis:
Qaamni biqilaa taalooyidii (caasaa gargar hin baafamne) qabaatu.
Tishuu vaskulaarii dhabeeyyii dha.
Marsaa jireenyaa isaanii keessaa miciree dhabeeyyii dha.
Imbiriyofaayitaan biqiloota dachee gartuu lama of jalatti qabatu. Biraayofaayitaa (biqiloota mitivaskulaaraa) fi Tiraakiyoofaayitaa (biqiloota vaskulaaraa) dha.
b) Yaadrimee mootummaa sadi
Akka dhiyaacha kanaatti lubbuqabeeyyii marti mootummoota sadi jalatti garteeffamu. Isaanis mootummaa biqilootaa, mootummaa bineeldotaa fi mootummaa pirotistaa dha. Mootummaa pirotistaa jalatti amala giddugaleessa qabeeyyii kanneen akka saaphaphootaa fi pirotoozowaa (daayinoofilaajileetota), biqilootaa fi bineeldota fakkeeyyiitu hammatama.
c) Yaadrimee mootummaa afurii
Daandiin deemsisaa ture biroon mootummaa pirotistaa, mootummaa fangasootaa, mootummaa biqilootaa fi mootummaa bineeldotaatti qooduu dha. Kun immoo yaada rimeen mootummaa afurii akka dagaagu godhe.
d) Yaadrimee mootummaa shanii
Argannaa meeshaa optikaalaa elektiroon maayikirooskoppii (Transmission Elelctron Microscope) ykn TEM dhaan walqabatee baayoloojistooti tokko tokko ruuqoo seelii duraan hin beekamne meeshaa ammayyaa kanatti gargaaramuu dhaan qorachuu danda’anii jiru. Aangoon gargar baasee agarsiisuu TEM x100000 dha. TEM kunis waan duraan dhokataa ture caasaa seelii keessaa saaxilee agarsiisuu danda’eera. Haaluma kanaan duraan gartuu seelota miseensota mootummaa biqilootaa fi mootummaa bineeldotaa jalatti ilaalamaa turanii adda baase. Kun immoo beektonni akka isaan yaada rimee mootummaa shanii dhiyeessaniif isaan kakaase.
Haala kanaa olitti ibsameen jalqabaa lubbuqabeeyyii hunda gartuulee lamatti ramaduun danda’amee ture. Ramaddiin kunis bu’uura jiraachuu ykn dhibuu membirenii niwukilasii uwwisuu fi akkasumas bu’uura jiraachuu ykn dhibuu orgaaneloota seelii biroo dhaan. Gartuuleen ramaddii lamaanis:
Pirokaariyoota– lubbuqabeeyyii niwukilasiin isaanii membiranii dhabeessaa fi orgaaneloota biroo hin qabne dha. Kanneenis baakteeriyeemoota fi saayinofaayitoota (saaphaphuu cuqulmagariisa) dha.
Iyukaariyoota– mara lubbuqabeeyyii niwukilasiin isaanii membiranii niwukilaariin uwwisamaa fi orgaaneloota seelii hunda qabeeyyii ta’anii dha.
Pirokaariyooti marti mootummaa moneeraa jala kanneen galfamani dha. Iyukaariyooti immoo mootummoota afuritti qoodamanii jiru. Kanaaf sirna mootummaa shanii jalatti kanneen hammataman; a) mootummaa moneeraa, b) mootummaa fangasootaa, c) mootummaa pirotistaa, d) mootummaa biqilootaa fi e) mootummaa bineeldotaa dha.
Mootummaan moneeraa amaloota ittiin beekaman maalfaa qabu?
Mootummaan moneeraa amaloota ittiin beekaman garaagaraa ni qabu. Mootummaan moneeraa lubbuqabeeyyii jiran hunda gararraatti heddummatoofi pirokaariyoota ijaaruutti mootummaa isa qobaadha. Jecha warra Girikii “moneres” jedhamu irraa kan fudhatame hiiknisaa qeenxee jechuu dha. Mootummaa kana jalatti kanneen hammataman baakteeriyaafi saaphaphuu cuqulmagariisadha. Amalootni lamaan isaanii waliin qooddatanis:
Lamaanuu nukilasii membirenniin miti haguugamaa qabaachuu.
Hundisaanii seelqeenxee dha.
Boca maramaa, akka eeboo fi ulee qabaachuun garaagarummaa agarsiisu.
Giddugaleessaan dheerina 1µfi ballina 0.5µ qabeeyyiidha.
Seeliin saanii alaan cichaa seeliin keessaan membirennii lippiidiin uwwifamaa dha. Membirenniin lippiidii kun wantoota gara keessa seeliitti seensisuufi keessaas gara alaatti baasuu dha.
Baakteeriyaan sochiilee adda addaa gochuun beekamu. Fkn. gara madda soorataatti, keemikaala
miidhaa geessisaan irraa baqachuu, ykn kanneen anniisaa ifaatiin soorata qopheeffatan immoo gara madda ifaatti ni socho’u. Sochii kanaaf caasaaleen itti gargaaraman silqixa, haphee (slime) dirra irra gangalachuu dandeessisu maddisiisuu, hidhaa qajjiisawwanii cichaa seelii alaa jalatti maramaa akka bolooniitti naanna’uun seenuu dandeessisan qabu.
Baakteeriyaan bidoollee kam keessa jiraatu?
Baakteeriyaan soorannoo isaanii haala attamiin argatu?
Baakteeriyaan bakka hunda biyyee, bishaan, qilleensa, irraafi keessa nafa lubbuqabeeyyii keessa
jiraatu. Pirokaariyoonni akkuma lubbuqabeeyyii kanneen biroo madda anniisaaf kaarbonii moliikiwuloota jireenyaa (kaarboohaayidireetota, pirootinoota, lippiidotafi nukilik asiidota) irraa
ijaarratan isaan barbaachisa. Pirokaariyoonni anniisaafi kaarbonii madda adda addaa irraa argatu waan ta’eef awutootiroofota ykn heterootiroofota ta’uu ni danda’u. Baakteeriyaa martinuu naayitiroojinii, salferii, foosfarasii, ashaboolee inorgaanikiifi maayikirooniwutiraantota ni barbaadu. Awutootiroofota kanneen ta’an soorata mataasaanii warra qopheefatanidha.
Baakteeriyoonni footoosintetikii ta’an kilooroofilii qabeeyyii waan ta’aniif anniisaa ifaa gargaaramu. Fkn saaphaphuu cuqulmagariisaafi baakteeriyaa salferii magariisa. Baakteeriyaan salferii madda haayidiroojiniif bakka H2O, H2Stti gargaarama. Baakteeriyaa biroon immoo kanneen keemoosinteetikii ta’an madda anniisaaf kan gargaaraman kompaawundoota inorgaanikaa (NH3, H2Sfi Fe) ti. Maddi kaarbonii isaanii garuu CO2 dha. Fkn baakteeriyaa biyyee keessa jiraatan Naayitiroobaakteeriifi Naayitirosoomonaasii dha. Baakteeriyaan burkuteessitoota ta’an anniisaa kan argatan biqilootaafi bineeldota du’an diiguudhaan dha. is sapaanis, pirofaayitoota jedhamu. Baakteeriyaan lubbuqabeeyyii biroo irratti maxxantoota ta’anis nijiru.
Adeemsawwan hormaata baakteeriyaa keessatti irra jireessaan baramoo kan ta’e kami ?
Pirokaariyoonni hedduun adeemsa seeliin isaanii bakka lamatti gargar hiramuun of baayissuun walhormaata geggeessu. Seeliin tokko of baayyisuu kana keessatti koppii ofiisaa waaan argamsiisuuf moleqiwuulii DNA tokko seelii haaraa uumameef dabarsee kenna. Kanaaf seelonni haala kanaan argaman qabiyyee amala dhaalaa qabaniin garaagartummaa hin qaban. Hormaati adeemsa kanaan baakteeriyaa keessatti raawwatamu daayiversiitii akaakuu naannoo jijjiiramaa adeemu keessatti uumamuusaa barbaachisaa ta’e ni daangessa.
Baakteeriyaan adeemsawwan jiinii isaanii ittiin walitti makatan adda addaa qabu. Adeemsawwan kanneenis tiraansfoormeeshenii, konjugeesheniifi tiraanisdaakshenii jedhamu. Tiraansfoormeesheniin adeemsa itti baakteeriyeemiin tokko bishaan ykn biyyee keessa jiraatu keessaa cabaa DNA baakteeriyeemii biroo ofitti fudhatee jijjiiramudha. Konjugeesheniin immoo baakteeriyeemiin laataa ta’e isa fudhataa ta’etti karaa ujummoo (pilus) ofitti qabsiisee DNA gara isa fudhataatti ceesisuun jijjiirama dhufudha. Tiraanisdaaksheniin ceesisuu DNA vaayirasii (Bacteriophage) dhaan milkaa’uu dha. Sanyiin baakteeriyaa haalawwan kanaan jijjiiramee argamu jijjiirama naannoo keessatti asiidummaa, tampireecheraafi keemikaala farra lubbuun walqabatee mudatamu dandammachuu dandeessisa.
1. Barattootaa garaagarummaa tiraansfoormeeshenii, konjugeesheniifi tiraanisdaakshenii gidduu jiru kitaaba wabii irraa ilaaluudhaan fakkii dhaan deggeraa agarsiisaa! Lubbuqabeeyyiin mootummaa moneeraa jalatti hammataman miidhaa maal geessisuu? Faayidaan isaan irraa argamuwoo maalfa’ii?
Baakteeriyaan miidhaa fi faayidaa addaa geessisa. Madaala qilleensaa eegsisuu, marsaa wantootaa milkeessuufi jireenya guyyaa guyyaa keessatti fedha ilma namaa guutuuf wantoota barbaachisan oomishuu keessatti bu’aan isaan argamsiisan hedduudha. Bu’aalee kanneenis:
N2 qilleensa keessaa kiyyeessuun gara kompaawundii NO3- biqilooti itti gargaaramaniitti jijjiiruufi 2.
kanneen footoosinteta’oo ta’an immoo O2 gara qilleensaatti gadi lakkisuun madaala qilleensa naannoo eeguu keessatti ga’ee xabatu.
Warshaafi jireenya guyyaa guyyaa keessatti aannan ititee urgoo laachuu, dhadhaa baasuufi baaduu oomishuu dandeessisu.
Dawaa farra lubbuu “Streptomycin” oomishuuf ni oolu.
Warshaa gogaafi kal’ee keessatti gogaafi kal’ee laaffisuufi warshaa tamboo keessatti immoo tamboon foolii qabeessa akka ta’u gochuu keessatti ni gargaaru.
Kosii naannoo keessaa dhabamsiisuuf hojii hojjetamu keessatti kosii irraa baakteeriyaan gaasii miteenii (methane gas) maddisiisan ni jiru.
Mar’imaan bushaayeefi loon keessa kanneen walutubbiin jiraatan akka isaan seeluloosii walxaxaa ta’e bulleessuu danda’aniif inzaayim seeluleesii maddisiisu.
Mar’imaan furdaa namaa keessa kanneen jiraatan vitamin k maddisiisuuf gargaaru.
Amala waliigalaa Pirotistaa:
Seelqeenxee ykn seelhedduu ykn gurmuun jiraatoo dha.
Orgaaneloota membiranniin haguugamoo fi nukilasii gurmaa’ina qabeessa waan qabaniif Pirootistaan iyukaariyoota dha.
Hedduunsaanii naannoo bishaanawaa jiraatu, garuu sanyii muraasi iddoo jiidhaa lafarra jiraatu.
Hedduun adeemsa walhormaata alsaallessaa, hirama walqixaatiin walhoru. Muraasi immoo adeemsa saalessaa konjugeesheniitiin walhoru. Konjugeesheniin kanneen walhoran walitti maxxananii wantoota dhaalaa waljijjiiruun hormaata raawwatu.
Gosa gurguddaa lamatti qoodamu: i) pirotistoota biqiloota fakkeeyyii- kilooroopilaastii keessatti kilooroofilii qabu waan ta’eef awutootiroofota soorata qopheeffatani dha. ii) pirotistoota bineeldota fakkeeyyii-lubbuqabeeyyii biroo sooratoo (heterootiroofota)fi bakkaa bakkatti kanneen sochii godhanidha.
Seenaa jijjiirama suuta suutaa qabaniin pirotistootni biqiloota fakkeeyyiin saphaphuu cuqulmagariisa irraa akka dhufaniifi akaakilee biqiloota magariisa har’aa ta’uusaaniitu
himama. pirotistootni bineeldota fakkaan immoo baakteeriyaa heterootiroofikii irraa kan dhufan ta’anii, akaakilee bineeldota ammayyaa jedhamee amanama..
Piritistooti biqiloota fakkeeyyiin saphaphuuwwan seelqeenxeefi seelhedduu of jalatti hammatu. Hundi isaanii killoofilii qabeeyyii waan ta’aniif soorata qopheessitoota. Seelhedduu kanneen ta’an aramaa galaanaa jedhamanii waamamu, seelqeenxee kanneen ta’an immoo faayitoopilaankitenoota jedhamu. Faayitoopilaankitenoonni dirra bishaanii irratti rarra’oofi bu’uura fuuncaa soorataa bidoollee bishaanii ti. Dabalataan O2 gara atimoosferiitti gadi lakkisuun madaala qilleensaa ni eegu.
Pirotistooti bineeldota fakkaaatan seelqeenxeefi pirotoozowaa jedhamanii waamamu. Naannoo bishaanawaafi biyyee keessa / maxxantummaan lubbuqabeeyyii biroo keessa jiraatu. Haala soorannoon heterotiroofota, lubbuqabeeyyii biroo qabachuun sooratoo, sapirofaayitoota ykn maxxantoota dha. Pirotistaan gosa garaagaraatti qoodamu (Gabtee 1.2. 1 )
Gabtee 1.2. 1. Murna, fakkeenya bakka bu’eefi caasaa sochii pirotistoota bineeldota fakkeeyyii.
Murna Fakkeenya bakka bu’ee Caasaa sochii
Sarkoodinaa Entamoeba histolytica Miilsoboo
Mastigoforaa Giardia lamblia Silqixa
Siilooforaa Balantidium coli Rifeensee
Isporozo’aa Plasmodium vivax Hinqabu
1.2.1. Mootummaa fangasootaa
Fangasoonni lubbuqabeeyyii iyukaariyoota dha. Cichaa seelii qabaachuudhaan biqiloota fakkaatu. Uumamni cichaa seelii isaanii garuu kan biqilootaa irraa addummaa qaba. Makaa kaarboohaayidireetii fi pireotinii, kaayitiinii jedhamu irraa ijaarame. kilooroofilii waan hin qabneef soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda’an. Kana heterootiroofota; burkuteessitoota, maxxantoota ykn walutubbiin kan jiraatoodha. Wantoonni kuusanii olkaa’atanis akka kan biqilootaa istaarchii osoo hin ta’in zayiitaafi gilaayikoojinii biqiloota keessatti beekamuun walfakkaataa dha. Amalawwan addaa qabaachuun mootummaa biqilootaa irraa foxxoqfamanii mootummaa maayikootaa ykn fangasootaa jedhamnii ramadaman. Fangasoonni amalawwan gurguddoo ittiin beekaman:
Soorannoon isaanii heterootiroofota; burkuteessitoota, maxxantoota ykn walutubbiin jiraatoodha.
Talasii- seelqeenxee, qaacawaa (filamentous) ykn darbee darbee pilaasmoodiyaalii (pirootoopilaazimaa qullaa walqabataa) dha.
Cichaa seelii- kaayitiinii irraa tolfame (gita Oomaayiseetota qofa keessatti seeluuloosii irraa tolfame).
Nukilasii- xiqqaafi membiranniin haguugamaa waan ta’eef iyukaariyoota.
Marsaa jireenyaa salphaa hamma walxaxaatti beekama.
Walhormaata alsaalessaafi saalessaa qabu.
Bidoollee- addunyaa mara irra tamsa’anii kan argaman ta’anii, “ubiquitous/ every where” dha.
Marsaa jireenya sanyii fangasii tokkoo kitaaba biroo irraa barbaadii sadarkaalee keessatti hammataman ifatti agarsiisuun daree keessatti gabaasa dhiyeessi.
Fangasii keessatti walhormaati alsaalessaafi salessaan attamitti raawwata?
Fangasoonni murnawwan lamatti qoodamu. i) Murna Maayksoomaayikootaafi ii)
1.2.3. Mootummaa biqilootaa (Kiriptoogaamotaa, Feneroogaamota)
Kiriptoogaamoti biqiloota daraaraa ykn sanyii dhabeeyyii jedhamu. Bal’inaan yammuu ilaalaman akka armaan gadiitti ramadamu.
Taalofaayitaa– nafa taalasii qabeeyyii waan ta’aniif; jirma, baalaafi hiddatti nafa miti adda bahoo
qabu. Saphaphuu, fangasootaafi laayikeniin as jalatti hammatamu.
Biriyoofaayitaa– nafa battee ykn taalooyidii jirmafi baalatti adda bahe qabu garuu hidda dhugaa hin qaban. Dabaree dhalootaa idilawaa gaametofaayitiifi ispoorofaayitii qabaachuudhaan beekamu. Naftisaanii mullataafi soorataan of danda’aan gaametofaayitii dha. Ispoorofaayitiin yeroo mara xiqqaataafi gaametofaayitii irratti qabatee kan argamuufi soorataanis isuma irratti hirkataa dha. Biriyoofaayitaa jalatti kanneen hammataman a) Hepaatikaa (liverworts) fkn Riccia fi marchantia,
b) Antooseerota (Horn worts) isporofaayitiinsaa gaametofaayitii irratti gariin hirkataa ta’efi c) Muskii (Mosses) fkn Polytrichum, Sphagnum, kkf. Bidoollee jiidhaafi gaaddisa jala jiraatu. Walhormaata alsaalessaafi saalessaan kan walhoran ta’eetu; Walhormatni alsaalessaa kutaan qaamaa guddachaa jiru addaan bahuu, gemmeefi adeemsa deebi’ee dhalachuun milkaa’a. Walhormaatni saalessaan immoo gameentanjiyaa (Arkegooniyaa fi antiriidiyaa) keessatti walduraaduubaan sanyii dhalaafi kormaa oomishamuun kan raawwatamu. Sanyiin kormaa silqixa qabeessa waan ta’eef walfudhannaan sanyii kormaafi dhalaa bishaan irratti hirkataa dha.
Marsaa jireenya biriyoofaayitaa keessa sadarkaalee jiran fakkeenya qabatamaa Sanyiwwan isaanii keessaa tokko fudhachuun agarsiisaa.
Faayidaa biriyoofaayitoonni naannoo keessatti qaban ibsaa.
Teeridofaayitaa- nafti biqilaa gara hiddaa, jirmaafi baalaatti adda baafamaa dha. Dabaree
dhalootaa idilee gaametofaayitiifi ispoorofaayitii qabaachuutti biriyoofaayitaa waliin wal fakkaatu. Haata’u malee, gaametofaayitiifi ispoorofaayitiin walirratti hirkattummaa irraa bilisa. Gaametoofaayitiin nyaata kan argatu qopheeffachuun ykn adeemsa sapirofaayitummaan (diiganii nyaachuun). Dhalootni isporoofaayitii akkuma zaayigootiin guddatee arkegonigaa keessaa mullateen nyaata qopheeffachuun of danda’uu eegala. Faallaa kan biriyoofaayitaatiin ispoorofaayitiin mullataa yammuu ta’u, gaametofaayitiin immoo xiqqaataa dha.
Tishuun vaaskulaaraa isaanii dagaagaadha waan ta’eef kiriptoogaamota vaaskulaaraa ni jedhamu. Kaarooleefi fakkeeyyii isaanii of jalatti hammata. Taalofaayitaan biqiloota bara durii (primitive) waan ta’aniif, kiriptoogaamota gadaanoo jedhamu. Biriyoofaayitaafi teridofaayitaan immoo dagaagoo waan ta’aniif kiriptoogaamota olaanoo jedhamuun beekamu.
Teridofaayitooti marsaa jireenyaa isaanii xumuruuf gahee wal hormaati alsaalessaafi saalessaan qaban kaarolee fakkeenya fudhachuun gareedhaan erga mari’attanii
booda gabaasa dhiyeessaa.
Naannoo keessatti teeridofaayitooti faayidaa maalfaa qabuu?
Teeridofaayitooti sanyiwwan gara 12,000 ol ta’an qabeeyyii yammuu ta’an, xixiqqoo bidoollee
bishaanii keessa jiraatan irraa eegalee hamma kanneen mukeen gurguddoo ta’aniitti jiran hammatu. Mukeen gurguddoo kanneen ta’an bosona tiroopikii keessatti faana 30-40 dheeratoo dha. Waliigalaan haala jiidha qabeessa tiroopikii irraa kaasee hamma iddoo gariin arkitikii ta’eetti tamsa’anii jiraatu. Bu’uuraa yammuu ilaalaman bidoollee lafaawaa irra jireeyyii ta’anii; iddoo jiidhaa, gaaddisafi dilallaatti argamu.
Shaakala 1.20 1. Garaagarummaa kotaayiledon lameefi kotaayiledon tokkee gidduu jiru walbira qabuudhaan
Feneroogaamoti biqiloota sanyii qabeeyyii dha. Murni biqiloota feneroogaamii murnawwan xixiqqaa lamatti qoodamu; i) murna xiqqaa jiminoospermii (biqiloota sanyii qullaa qabeeyyii)fi ii) murna xiqqaa anjiwoospermii (biqiloota sanyii haguugamaa qabeeyyii) dha. Anjiyoospermii deebi’anii gitawwan lamatti qoodamu; kotaayiledon lameefi kotaayiledon tokkee.
i) Murna xiqqaa jiminoospermii-biqiloota sanyiin (seed) isaanii cichaa oovaariitiin ittisamoo hin taane sanyii qullaa qabeeyyii dha. Seenaa keessatti bara Meesozoyikii keessumattuu wayitii Juraasikii jedhamuun beekamutti heddumatoo turan. Yeroo har’aa garuu sanyiwwan (species) 900 keessaa 500 koniiferoota kanneen ta’an qofatu jiru. Addunyaa guutuu irra tamsa’anii argamoofi bosona addunyaa keessaa 1/3 isaanidha. Gareewwan beekamoon saayikaadotaafi koniiferoota. Kanneenis olaantummaan heddummachuu isaanii zoonii diilallaa iddoo cabbiin madda bishaanii ta’e keessatti qabatanii jiru. Amaloota jiminoospermooti ittiin beekaman muraasni
Sanyii golgaa hin qabne qabu.
Biqiloota koonota caasaawwan baala fakkaatan ispooraanjiyaa ispooriin keessatti dagaagu qabeeyyii dha.
Marti tiraakaayidii zaayilamii qabu.
Oovaarii dhabeeyyii waan ta’aniif firrii hin qaban.
Biqiloota heteroospooriyeesii – maayikiroospoorota fi meegaaspoorota uummatan dha.
Walhormaati saalessaa milkaa’uuf qilleensaan waan baatamuuf bishaan irratti hirkataa miti.
Martinuu bardheeroo jireeyyiifi mukeen dheeroo ykn shiraabota dha. Gonkumaa herboota ykn bartokkee ta’uu hin danda’an.
Faayidaa dinagdee jiminoospermootaa:
Muka lallaafaa ijaarsaaf oolan, warshaa waraqaafi kkf hedduutu irraa argama.
Mukni paayinii madda haphee “turpentine” ti.
Mukeen nyaataaf oolan ni jiru . Fkn Paayinii
madda oomishama daawwa ta’uu
Miidhaginaaf kan oolanis ni jiru. Fkn. Saayikaadota
ii) Murna xiqqaa anjiwoospermii– biqiloota daraaraa qabeeyyii dachee irrat ti. Lafa kanarratti
olaantummaan kan beekaman dha. Sanyiwwan 250,000 ta’an maqaan moggaafameef hiru. Anjiwoospermoota milkaa’oo kan taasisan :
Sanyiin ovaarii keessatti haguugamee ittisa argachuu
Bakka koonii daraaraa qabaachuu fi bullaan daraaraa salphaatti tamsa’uu.
Bidoolleewwan garaagaraa keessa jiraachuuf ittibaroo dha.
Firrii uummachuu danda’uu. Ooviyuuliin sanyiifi oovaariin mmoo firrii uumu.
1.2.5. Mootummaa bineeldotaa
V. Mootummaa Bineeldotaa
Bineeldonni hundi isaanii seelii hedduu irraa ijaaraman. Baay’een isaanii bakka irraa bakkatti socho’uu danda’u. Seeliin bineeldotaa halluu magariisa waan hin qabneef nyaata isaanii qopheeffachuu hin danda’an. Kanaafuu, hrtirootiroofikii jedhamu. Seeliin isaanii cichaa seelii hin qabu. Sirna narvii ni qabu. Bineeldonni murna (phyla) 33 qabu. Haata’u malee, kanneen keessaa kan gurguddoo ta’an qofa ilaalla.
Murna poriiferaa (Fakkeenya: Ispoonjota)
Murna seelentirata (Fakkeeny: nidaariyaa)
Murna pilaatiihelementoota (Fakkeenya: Raammoo battee)
Murna nemaatoodaa (Fakkeenya: Raammoo ulee)
Murna Analiidaa (Fakkeenya: Raammoo sararaa)
Murna Muluskaa (Fakkeenya: Bineeldota qaama lallaafoo, kan akka cilalluu)
Murna Ikinoodarmaataa ( Fakkeenya: Bineeldota gogaa qoraattii)
Murna Artiroopoodaa (Fakkeenya: Bineeldota miila walqabataa)
Murna Kordaataa (Fakkeenya: Bineeldota Notokoordii qaban)
Murna armaan olitti tarreeffaman keessaa tokkoo hanga saddeetii kan jiran orgaanizimoota lafee dhabeeyyiidha. Murni kordaataa immoo lafee qabeeyyii hammata.
Jechi kordaataa jedhu jecha notookoordii jedhu irraa dhufe. Notookordiin caasaa dadacha’uu danda’uu fi kan morgaa irraa hojjetamedha. Dabalataanis. karaa duuba (dorsal) bineeldotaa kan gad bu’u fi qaama bineeldotaa utubudha. Bineeldonni murna kordaataa jalatti ramadaman hundi amaloota armaan gadii waliin qabu.
Marsaa jireenya isaanii kessatti sadarkaa ta’e tokko irratti notookoordii ni qabu
Narvi koordii qaawwa ta’e ni qabu. Kun notookoordii olitti argama
Sadarkaa dagaagina isaanii jalqabaa irratti giili siltii qabu, kun booda irratti garuu gara sombaa fi giilii tti jijjiirama.
Vertebiratoonni lafee wiirtuu dugdaa qabu. Dabalataanis amaloota armaan gadii qabu.
Iskeleetanii keessoo (endoskeleton) kan lafee ykn morgaa irraa hojjetame qabu
Sirna marsaa dhiigaa cufaa fi ujummoo dhiigaa qabu.
Sirna narvii dagaage qabu
Liimbii (extremes) cimdii lama qabu
Qaama usaansaa kale qabu
Murni kordaataa, gita (class) shan qaba. Isa anis:
Gita Qurxummiilee: Qurxummiilee hunda hammata.
Qurxummiileen maadikiperiifi laangifishii irraa kanafe hundinuu bishaan keessa jiraatu. Caasaa qaamaa bishaan keessaa daakuuf isaan gargaaru qabu. Sirna hargansuu isaaniitiif giilii fayyadamu. Qurxummiileen hedduu irra keessaan (duuba) gurraacha yoo ta’an garaa jalaan immoo adiidha. Qurxummiileen ektootermoota. Kana jechuun, tempireechera qaama isaanii eeguudhaaf ho’a naannoo isaanii irratti hundaa’u.
Gitin kun amfiibiyaanota kanneen akka fattee hammata. Jechi amfiibiyaa jedhamu jechoota Giriiki lama irraa dhufe. Isaanis: “Amfii”, jechuun hunda, akkasumas “baayosii” jechuun immoo lubbuu jechuudha. Kanaafuu amfiibiyaanonni gartokkee jireenya isaanii sadarkaa laarvaa ykn toodipoolii irratti bishaan keessatti dabarsu. Karaa biraa immoo sadarkaa ga’eessaa irratti lafa irra jiraatu. Amfibiyaanonni lafee qabeeyyii yeroo jalqabaaf lafa irra jiraachuu jalqabanidha. Somba salphaa korojo fakkaatu, qaama lallaafaa fi gogaa jiidhaa kan hargansuuf isaan gargaaru qabu. Giiliin sadarkaa laarvaa irratti qofa jiru hargansuuf gargaara. Adeemsi fertilaayizeeshinii alaa (external fertilization) bishaan keessatti raawwata. Amfiibiaanonni ektootermoota.
Repitaayiloonni irra caalaan lafaa irra jiraatu. Waggoota miiliyoonota hedduuf garee lafa kana irraa ol aantummaan jiraataa turanidha. Gogaan isaanii gogaadha (dry) akkasumas iskeelii of iraa qaba. Sombatti gargaramuun sirna hargansuu isaanii gaggeessu. Fertilaazeeshinii keessaa (internal fertilization) gaggeessuun anqaaquu (puphaa) sheelii qabu lafa irratti buusu. Repitayiloonni sadarkaa dagaagina miciree isaanii irratti giili siltii qabu, Gurra alaa hin qaban. Repitaayiloonni ektootermoota. Fakkeenya: Bofa, Naacha, lootuu fi kkf
Gitini kun sinbirroota hammata. Sinbirroonni qaama isaanii hedduu irrati baallee (feathers), miila isaanii irratti immoo iskeelii (scales) qabu. Koochoo ittiin balali’anis ni qabu. Mangaagaan isaanii ilkaan hin qabu garuu biikii caasaa gaafa fakkaatuun aguugame ni qabu. Sinbirroonn puphaa sirriitti dagaage fi sheelii jabaataan haguugame buusuun walhoru. Sirna lafee (iskeleetenii) salphaa waan qabaniif ulfaatina qaamaa salphaa qabu. Kanaafuu samii irra balali’uu ni danda’u. Sinbirroonni indootermoota. Kana jechuun tempireechera qaama isaanii eeguuf, adeemsa gubama soorataatiin anniisa qaama isaanii keessaa bahutti faffadamu.
Hoosfitoonni bineeldota keessaa baay’ee beekamoodha. Hoosfitoonni korodaatota biro irraa amaloota hudduun addaa addummaa agarsiisu. Hoosfitoonni dhugaan xannacha aannanii (mammary gland) waan qabaniif dhala isaaniitiif aannan ni omishu. Akkasumas, ho’a qaama keessaa ol aanaa ni qabu, ho,a qaama isaanii kanas to’achuu ni danda’u. Xannachoonni dafqaa adeemsa ho’a qaama isaanii to’achuu keessatti gahee ni qaba. Hoosftoonni gogaa isaanii fi gurra alaa isaanii irratti rifeensa ni qabu. Hoosftoonni hedduun fertilaayizeeshinii keessoo gaggeessuun micireen uumame gadameessa keessatti erga dagaagee booda dhalata. Hoosftoota lafa kana irra jiratan keessaa, hoosftoonni qaamaan hamma xiqqaa ta’an shiriwu (Shrew) jedhamuun yemmuu beekamu, inni guddaan immoo arba (elephant). Fakkeenya hoosfitootaa keesaa dhalli namaa tokkodha.
Gita xiqqaa hoosfitootaa
Hoosftoonni akkaataa itti dhala isaanii argatan (dhalan) irratti hundaa’uun gita xiqqaa lama qoodamu. Isaanis: i)Gita xiqaa Pirotooteeriyaa
Isaan Kun hoosfitoota buphaa (anqaaquu) buusani ilmaan garuu aannaniin guddisan dha. Fakkeenya: Daak-biildi pilaatipasii (duck-billed platypus)
ii) Gita xiqaa Teeriyaa
Gita irra xiqqaa Meetaateeriyaa Marsuupiyaalota (Marsupials):
Kanneen ilmaan gadameessaa keessatti hin dagaagiin dhalanidha. Isaan kun miciree hin dagaagiin erga dhalanii booda korojoo garaa isaanii jala jiru keessaa kaawwachuun aannan sooruun guddisu.
Fakkeenya: Kangaarroo, Ko’aalaa biirii (koala bear), opoosumii (opossum)
b. Gita irra xiqqaa Iyuuteeriyaa (Hoosiftoota Dhugaa) Hoosfitoota ol-aanaa (higher mammals):
Dhala gadameessa keessatti guutumman dagaage dhaluun harma hoosisuun guddisu.
Fakkeenya: Hntuuta, Jaldeessa, Loon, Arba, Adurree, Namaa fi kkf.
BOQONNAA 2: BAAYOLOOJII NAMAA
Dalagaalee sirna bullaa’insa soorataa ni tarreessu, fakkii sirna bullaa’insa soorataa kaasuun qaamolee garaagaraa ni agarsiisu;
Adeemsa bullaa’insa fi xuuxama soorataa ni addeessu;
Qulqullina afaanii fi fayidaa qulqullina fayyaa ni ibsu;
Caasaalee sirna hargansuu namaa adda baasuun dalagaa isaanii ni tareessu;
Qilleensaa ol fudhannu fi gadi baafnu wal bira qabuun garaagarummaa isaanii ni hubatu;
Tooftaalee hargansuu fi waljijjiirraa qilleensaa ni hubatu;
Qabattoota naannoo hargansuu irratti dhiibbaa qaban ni tarreessuun;
Tooftaa qulqullinni hargansuu eegamuu fi miidhaa timboo xuuxuu ni himu;
Tartiibota hargansuu nam tolchee tarreessuun ibsu;
Ruuqoolee sirna marsaa dhiigaa adda baasu;
Moodelii ilaaluun kutaalee onnee namaa addan baafatu;
Ujummoolee dhiiga sadanii fi qabiyyee dhiigaa adddan baasuun hubatu;
Garee dhiiga namaa akka sirna ABO fi Rh tti garteessu yaalu;
Dhukkuboota sirna hargansuu (aneemiya fi dhiibbaa dhiigaa tarreessuun ibsu;
Caasaa , dalagaa fi gosoota niwuronii hubatu;
Uumamaa fi daddarba ergaa neervii adda baafatu;
Hiikkaa sirbiduu fi gosoota isaanii addan baafatu;
Caasaalee fi dalagaalee ijaa fi gurraa adda baafatu;
Sirna walhormaataa namaa ibsu;
Garaagarummaa xannachoota indookiraayinii fi eksookiraayinii ni hubatu;
Uumama, amala, dalagaa fi gosoota hormoonii ni ibsu;
Mudaalee xannachoota indookiraayinii ni ibsu;
Hiikkaa usaansaa ni kennu;
Caasaalee adeemsa usaansaa keessatti qooda fudhatan ni tarreessuun ni ibsu.
2.1 Sirna Bullaa’insa Soorataa
Dhangaaleen gurguddoon (kaarboohaayidireetii, pirootinii fi liipidii) nyaataan gara qaamatti
fudhataman akka jiranitti qaamaaf bu’aa hin kennan. Dhangaaleen kun qaamaaf faayidaa kan kennan yommuu daakamuun gara molikiyuulota xixiqqootti (sukkar tokkee, amino asiidotaa fi faatii asiidii fi gilaayiseroolittii, walduraa duubaan) yoo jijjiiramanii dha. Jijjiiramuun isaanii kun bulla’insa soorataa jedhama. Kana jechuun, dhangaalee gurguddoo hamman xixinneessuun qaawwa dhaabaa marrummaan akka seenuu danda’anitti qopheessuu dha. . Dhangaaleen kun qaamaaf faayidaa kan kennan yommuu daakamuun gara molikiyuulota xixiqqootti
yoo jijjiiramanii dha.
qallaa, kaapilaarii dhiigaa fi membireenii seelii muraasa sirna bullaa’insa soorataa keessatti argamaniin. Sirni kun dabalataan adeemsaalee kan akka soorata seensisuu, dabarsuu, kuusuu, xuuxuu fi qaamaa baasuu raawwata.
2.1.1 Qaamolee Bullaa’insa Soorataa
Qaamoleen sirna bul’insa soorataa bakka gurguddoo lamatti qoodamu: ujummoo soorataa fi qaamolee gargaaroo jedhamu (Fakk.2.1). Sirna bul’insa soorataa namaa keessatti bakka bal’aa kan qabatee jiru ujummoo yyommuu ta’u hanga meetira 6-9 kan dheeratuu dha. Ruuqooleen ujummoo kanaa: afaan, esoofagasii, garaacha, marrummaan qallaa fi marrummaan furdaa dha. Tiruu fi rajiijiin qaamolee/xannachoota gargaartota ujummoo soorataa alatti argamanii dha. Xannachoonni kun karaa ujummoolee addaa dhangala’oo isaanii bullaa’insa soorataa kemikaalaaf gara marrumman qallaa (dodineemii) tti dhangalaasu. Tiruun karaa ujummoo hadhooftuu ashaboo hadhooftuu yommuu dhangalaasu, rajiijiin immoo karaa ujummoo rajiijii inzaayimoota rajiijii dhangalaasa.
Fakkii 2.1 Sirna bul’insa soorataa namaa
2.1.2 Adeemsa Bullaa’insaa Soorataa
Bullaa’insi soorataa bifa lamaan gageefama: Bulllaa’insa soorataa fiizikaalaa fi Bullaa’insa soorataa kemikaalaa ti. Molikiyuulotni soorataa gurguddoon Ilkaanii fi maashaa ujummoo buullaa’insa soorataan caccabuun bullaa’insa soorataa fiizikaalaa jedhama. Adeemsa kanaan jijjiiramni bocaa waan argamuuf bullaa’insa kemiikaalaa keessatti inzaayimni dirra bal’aa argata. Bullaa’insa soorataa keemikaalaa keessatti gochaa inzaayimaatiin dhangaaleen gurguddoon gara monomeroota isaaniitti jijjiiramu. Kana jechuun;
· Kaarboohayidireetoni (istaarchii, sukkar lamee) gara sukkar tokkeetti,
Prootiinooni gara amiinoo asiidiittiLippiidonni gara faatii asiidii fi gilaayiserooliitti jijjiiramu.
Bul’insa soorataa keemikaalaa kan geggeeffamu : istaarchiin afaan keessatti; pirootiniin garaacha keessatti; molikiyuulota soorataa gurguddoo sadan marrumman qallaa keessatti ta’a.
2.1.3 Caasalee Sirna Bul’insaa Soorataa
Holqa afaanii keessatti nyaatni ilkaaniin caccabee gargaarsa arrabaan walmaka. Kun bulllaa’insa fiziikaalaati. Bul’insa kemikaalaan amilesii gororaatu (taayalinii) istaarchii gara maltosiitti jijjiira.
Afaan keessa nyaatni boca kubbaa qabachuun gara esoofagasiitti liqimfama. Nyaatni kun kottonfannaa maashaa paristaalsisii jedhamuun esofagasii keessa dhiibamuun huutuu esoofagasii fi garaacha daangessu keessa darbuun garaacha seena. Huutuun kun isfinikterii paayiloorikii jedhama. Peristaalsisiin esoofagasii keessatti qofa kan raawwatu osoo hin taane ujummoo soorataa hunda keessatti haala jiruu dha. Adeemsa paristalsisii keessatti dabaree dabareen kutaan qaama soorataa nyaata booda jiru yommuu kottoonfatu inni nyaata dura jiru immoo diriirfachuun nyaata ofitti fudhata (Fakk. 2.2).
Fakk.2.2 Adeemsa paristaalsisii ujummoo soorataa
Nyaati afaanirraa garaacha seene maashaa garaachaan sukkuumama. Kun bul’insa fiziikaalaati. Garaacha keessatti pirotiniin jajjaboon peepsiniin gara peptonitti jijjiirama. Pirotiniin aannanii dhangala’aan (casein) reeniniin (da’ima keessatti) gara pirotinii jajjabootti jijjiramuun peepsiniin bullaa’a. Xannachi garaachaa dhangala’aa cuunfaa garaachaa jedhamu maddisiisa. Qabiyyeen cuunfaa kana;
Inzaayimoota (peepsinii, reeninii)- bulleessuu pirotiniif
Asiidii (HCl) – holqa garaachaa asidawaa taasisuu, baakteriyaa nyaataa wajjin seenu ajjeesuu, pirootinii cicciruun gochaa peepsiniif saaxiluu.
Laanqessaa- dhaabaa garaachaa gochaa peepsiniirraa ittisuu.
Turtii sa’atii tokkoo hanga afurii booda nyaati bulbulamaan asiidawaa ta’ee kaayimii jedhamuun kan beekamu huutuu garaachaa fi marrummaan qallaa daangessu keessa darbuun marrummaan qallaa seena. Huutuun kun isfinikterii esoofaajaalii jedhama.
C. Mar’umman qallaa
Marrummaan qallaan qaamolee sirna bullaa’insa soorataa keessa isa dheeraa ta’ee fi kutaa sadiitti qoqoodame kan argamuu dha. Isaanis; isa olii, odinemii; isa gidduu, jejineemii fi isa gadi, iliyemii dha. Mar’umman qallaa keessatti gosoonni soorataa gurguddoon sadanuu carraa inzaayimaan daakamuu qabu. Kunis haala armaan gadiin ibsamee jira (Gabatee 2.1).
Gabatee 2.1 Bullaa’insa soorataa marrummaan qallaa keessatti
Inzaayima Madda Akaakuu soorataa bullaa’u Firii dhumaa
Amilesii Rajiijii , mar’umman qallaa Istaarchii/ amilosii Maaltosii
Sukireesii mar’umman qallaa Sukuroosii Giluukoosii+ Firuuktosii –
Maalteesii mar’umman qallaa Maaltoosii Giluukoosii + Gilukoosii
Gaalaaktesii mar’umman qallaa Laaktoosii Giluukoosii +Laakteesii
Eksoopeptidesii Rajiijii Peptaayidii aminooasiidiitti
Tiraayipsinojini (inzayima miti si’ataa) tiraayipsiniitti ( inzayima si’ataatti)-
Tiraayipsinii Rajiijii Pirotinii peptaayidiitti
Rajiijii Chiimootiraayipsinojinii Chiimootiraayipsinitti
chiimootiraayips inii Rajiijiin Pirootinii amino asiidiitti
Lipeesii Rajiijii Cooma(gargaarsa hadhooftuu tiruutiin) faatii asidii fi gilaayiserooliitti
2.1.4 Xuuxamaa fi assimileeshenii
Dhangaalee soorata keessa jiran qaawwa dhaabaa marrummaan qallaa, kaapilaarii dhiigaa fi membireenii seeliitti fudhatamuun xuuxama jedhama. Caasaan mar’ummaan qallaa, viilaayii (viilli) xuuxama soorataaf haalaan mijataa dha. Sukkar tokkeen, daayipeptaayidii fi amino asiidiin viilaayii keessa geejjiba si’ataan ykn diffuushiniin kaapilaarii dhiigaa seenu. Dhuma irratti kaapilaaronni kun walitti dhufuun veeyinii addaa kan soorata xuuxame tiruutti geessu uumu. Veeyiniin kun hepatic portal veeyin jedhama. Faatii asiidii fi gilaayiserooliin ujummoo liimfii, laaktel, jedhamu seenuun naannoo onneetti, tiruurra ce’uun, veeyinii guddaatti xuruuru Nyaati xuuxamee sirna marsaa dhiigaatiin seelota bira ga’e dalagaa garaagaraaf oola. Kun immoo assimileeshenii jedhama.
2.1.5 Fayyummaa sirna bullaa’insaa
Goginsa garaa – bobbaan gogee dhabamsiisuuf rakkisaa ta’uu.
Sababa – Bishaanni haala hin barbaachifneen bobbaa marrummaan furdaa keessa jiru keessaa xuuxamuun, nyaata faayiberii nyaachuu dhabuu, bishaan baayinaan dhuguu dhabuu
Miidhaa- yommuu ittanan qaawwi teessuu baqaquu, dhiita’uun kintaarotii fiduu
Ittisa – nyaata faayiberii nyaachuu, bishaan baayinaan dhuguu.
Garaa kaasaa-bobbaan laafee bishaan ta’uu
Sababa – patoojinootaan faalamuu,
Miidhaa- seelota gogsuun mancaasuu
Ittisa – qulqullina waliigalaa qabaachuu, bishaan gahaa dhuguu
Sababa- nyaata booda lulluuqachuu dhabuu, rigachuu/miiccachuu dhabuu
Miidhaa- adeemsi bullaa’insi soorataa hanquu ta’uu; afaanni foolii baduu,
Ittisa – nyaata booda lulluuqachuu , rigachuu/miiccachuu
2.2 Sirna Hargansuu
Jechi hargansuu jedhu yeroo baayyee jecha rispaayireshenii jedhuu waljala jijjiiruun yoo gargaaramnes hiikkaan isaanii tokko miti:
Qileensa O2 niin badhaadhe fudhachuu fi qileensa CO2 n badhaadhe baasuun hargansuu ykn respaayireeshenii alaa (external respiretion) jedhama.
Somba keessatti O2 alvoolaayii keessa gara dhiigaatti dabaluu fi CO2 diiga keessa gara alvoolaayiitti lakkisuun waljijjiirraa qilleensaa jedhama.
seelota keessatti O2 fayyadamuun CO2 tti jijjiiruun immoo respayireshenii keessaa
/respayireshenii seelii (internal rispiretion) jedhama.
2.2.1. Caasaalee sirna hargansuu
Qaamni ijoon sirna hargansuu somba yommuu ta’u caasaaleen isa tumsuun sirna kana ijaaran immoo kan akka funyaanii, ujummoo funyaanii, laagaa, saanduqa sagalee, fi tiraakiyaa dha.
Tiraakiyaan naannoo sombaatti damee lama uummata- bironkaayii (qeen. bironkasi).
Bironkasiin somba keessatti deebi’ee dameelee hedduu uummata. Jalqabatti bironkasi lammataa; bironkasiin lammataa immoo bironkasii sadaffaa, ishee baayyee xinnoo uuma.
Tokkon tokkoon bironkasii sadaffaan deebi’uun ujummoo xixinnoo bironkiyoliisi jedhaman uumu.
Tokkon tokkoon bironkiyoliisi deebi’uun bironkiyoliisi dhumaa(terminal bironchioles) uummata.
Tokkon tokkoon bironkiyoliisi dhumaa deebi’un damee shifii ujummoo alvoolaayii jedhamu uummatu.
Tokkon tokkoon ujummoo alvoolaayii deebi’un, koroojoo qilleensaa ykn alvoolaayii uummatu(Fakk. 2.3).
Sombi nama tokkoo cimdii ta’ee holqa qomaa keessatti argama. Tokkon isaa aguuggii dachaa meembireenii piluraa jedhamuun marfamee argama. Dhaabaan holqa qomaa kan somba marsee jiru immoo pariital piluraa (parietal pleura) jedhamu.Sombi mirgaa isa bitaarra guddaa ta’e mucha sadii kan qabu yommuu ta’u inni bitaa xinnoo fi kutaa akka muchaa (lobes) lama kan qabuu dha. Sombi lachuu tilmaamaan kilogiraama 1.3 kan ulfaatan ta’e , inni bitaa isa mirgaa ni caala.
2.2.2 Dhiibbaa Caasaaleen hargansuu gara Olii qilleensa seenu iraatti qaban
Caasaaleen hargansuu garri olii (fkn. ujummoon funyaanii fi tiraakiyaan) qilleensa gara keessatti fudhatan irratti garaagarummaa hedduu uumuu dhaan dabarsu.
kaapilaarota gahaa qabu- kanaaf, qilleensa ho’isee dabarsa.
wantoota rifeensee fakkatan hedduu qabu- kanaaf, dhukkee, jarmii fi suddoonni adda addaa of duuba deebisu.
laanqessaa maddisiisu- kanaaf, dhukkee, jarmii, partikiloota xuuxun ol deebisu.
Fakkii 2.3 Sirna hargansuu namaa
2.2.3 Adeemsa Hargansuu
Hargansuun feezii lama qaba – qilleensa ol fudhachuu fi qilleensa baasuu.Qilleensa ol fudhachuun
inispaayireeshinii yommuu jedhamu baasuun immoo ekispaayireeshenii jedhama.
Yeroo Qilleensa l fudhachuu / inispaayireeshinii:
Maa shaan lafee cinaachaa inni alaanii ni kottonffata; inni keessaan immoo ni diriira.
Haalli kun lafeen cinaachaa ol ka’uun gara alaatti akka dhiibamu taasisa.
Yeruma kana maashaan diyaafiramii kottoonfatee gadi harkifama.
Haalli kun lamaan dabaluu qabee qomaa fi sombaa fiduun dhiibbaa somba keessa jiru gadi buusa.
Xinnaachuun dhiibbaa keessa immoo salphaatti inispaayireeshiniif haala mijataa uuma.
Yeroo ekispaayireeshenii haalonni inispaayireeshinii armaan olii tti eeraman bifa faallaa ta’en raawwatu. Kana jechuun;
Mashaan lafee cinaachaa inni alaanii ni diriira; inni keessaa immoo ni kottonffata.
Haalli kun lafeen cinaachaa gdi akka deebi’u taasisa.
Yeruma kana maashaan diyaafiramii diriiree ol qooqqifatal.
Haalli kun lamaan xinnaachuu qabee qomaa fi sombaa fiduun dhiibbaa somba keessa jiru dabalu.
Dabaluun dhiibbaa keessa immoo salphaatti eksipaayireeshiniif haala mijataa uuma.
2.2.4. Waljijjiirraa Qilleensaa
Somba keessatti caasaan waljijjiirraa qilleensaa mijataan alvolaayii dha. Haldureen beekamaan adeemsa kanaa dhiibbaa gar-tokkee (P) makaa qilleensa alvolaayii fi kapilaarii sombaa keessa jiruti. Dhiibbaa gar-tokkee (P) jechuun, bakka qilleensi walmakiinsaan jirutti dhiibbaa tokkon tokkoon qilleensaa qabuu dha. Somba keessatti wal-makiinsi qilleensa alvolaayii fi kapilaarii sombaa gidduu jiru garagarummaa guddaa agarsiisa. Kana jechuun;
Marsaa dhiigaa dachaa keessatti dhiigni O2 hin qabne ykn O2 muraasa qabu (PO2
=40mmHg) ; CO2 baayyee (PCO2=45mmHg) qabu, onnee mirgaarra gara sombaa dhufa.
Adeemsa inispaayireesheniin immoo qilleensi O2 baayyee (PO2 =105mmHg ); CO2 muraasa (PCO2=40mmHg) qabutu somba seena. Kana haala arman gadiin agarsiisuun ni danda’am (Gabate 2.2):
Gabate 2.2 Dhiibbaa gartokkee qilleesa ijoo sirna hargansuu.
Dhiibbaa gar- tokkee(p) Qilleensa alvolaayii Dhiiga somba seenuu Dhiiga somba ba’u Seelota qaamaa
PO2 105 mmHg 40 mmHg 105 mmHg 40Hg
PCO2 40 mmHg 45 mmHg 40 mmHg 45Hg
Kanaaf, adeemsa diffushiniin O2 alvoolaayii keessa dhiiga seenuuf, CO2 immoo dhiiga keessa alvolaayii seenuuf dirqama (Fakk. 2.4). Haalli kun waljijjiirraa qilleensaa jedhama.Dhumarratti dhiigi qulqulluun (O2 baayyee (PO2=105 mmHg ), CO2 muraasa (PCO2=40mmHg) qabu gara onnee bitaatti deebi’a.
Fakkii 2.4 Waljijjiirraa qilleensaa alvoolaayii keessatti
2.2.5 Ariitii Hargansuu Irratti Wantoota Dhiibbaa Geessisan
Nami ga’eessi boqonnaa sirrii keessa jiru giddu galeessaan daqiiqaatti 12- 14 hargana. Qabeen
qilleensaa inni hargansuu tokkon fudhatee baasu immoo 500ml ta’a. Kun qilleensa qabee taayidaalii (tidal volume) jedhama. Hammidaan sombi qabachuu danda’uu immoo dandeettii vaayitaalii (vital capacity) sombaa jedhama.
Qaamni keenya qilleensa (oksiijinii) sababa ta’een baayinaan barbaadeera taanan waan lama gochuun dirqama. Isaanis: ariitiin harganuu fi gadi fageenyaan harganuu dha.Sababi kamiyyuu kan itti fayyadamuu oksiijinii dabalu ykn rukkina oksiijinii xinneessu hundi, ariitii hargansuu dabaluun isaa dirqama. Kanaafuu, haallen ijoon ariitii hargansuu irratti dhiibbaa geessisan kanneen armaan gadiiti:
Sochii qaamaaDhiphina/muddama/sodaachuuQoricha fayyadamuuAltitudiiUlfaatina qaamaaTamboo xuuxuu dha.
Haalonni kun haala kamiin dhiibba ariitii hargansuu irratti fidu?( koorsii BSc 101 yaadadu)
Altititiudii ol ka’aa irratti rukkinni (density) O2 maal ta’ah deema? dhibantaan isaa hoo? Maaliif?
2.2.6 Dhukkuboota Sirna Hargansuu
Dhukkuboonni sirna hargansuu madda garaagaraa qabu. Haata’u malee, kanneen kemiikaala aara tamboo fi paatojinoota maxxanoon dhufan kanneen baayyee hamoo ta’aniidha. Dhukkuboonni sirna hargansuu aara timboon dhufan keessa murasi:
Bironkaayitisii – kulkuluu (infamation) fi daariqaa’uu/hubaatii ujummoo (infection) bironkaayii
Emfaayisemaa – alvoolaayiin bokokuuf dhiita’uu.
Kaanserii sombaa – sombi seelota hin barbaachifnee fi kan seelota sirrii mancaasaniin wareeramuu dha.
Dhukkuboonni sirna hargansuu aara tambooti ala dhufuu danda’an-
Nimooniyaa – kulkuluu som baa sababa baakteeriyaa ykn vaayiresiin dhufuu dha.
Daranyoo sombaa (TB) -baakteriyaan kan dhufu.
Asimmii – jeequmsa adeemsa hargansuu kan sababa aalarjiin dhufuu dha.
2.2.7 Qulqullina Hargansuu
Yeroo qilleensa ol fudhannu kamittuu maayikiroobota (microbs) dhukkuba fidan ol fudhachuun keenya dirqama. Maayikiroobonni kun qaama keessatti baayyachuun turtii dhaan balaa fiduu danda’u. Darbees afuurri nuyi baafannu namoota naannoo keenyaa ciigaasisuu/jibisiisuu hin qabu. Kanaaf, qulqullina hargansuu dhugoomsuuf seerota bu’uura ta’an hordofuun barbaachisaa dha. Seeronni kunis-
Nyaata booda yeroo kamiyyuu afaan ofii qulqulleessuu, ilkaan rigachuu/qulqulleessuu/.
Yeroo qufaanu, haxxiffannu afaanii fi funyaan keenya harkaa keenyaan golguu; Ofiis qaama keenya xuqame battalatti dhiqachuu .
Bakka faalami jira jennee shakkinutti aguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamuu
Bakka jirrutti qilleensa gahaa fi socho’aa argachuuf haala mijeeffachuu (foddaa, balbala, vantileetorii, kkf. banachuu.)
Hargansuu afaanii xiqqeessuu/dhorkuu. Kun maaliif sitti fakkaata?
2.2.8 Hargansuu nam-tolchee
Yeroo tokko tokko hargansuun uumamaa dhaabbachuu mala. Kun haala kan akka- balaa konkolaataa, bakakkaa, miidhama onnee, bishaaniin liqimfamuu, fe’amuu fi karbon
monoksaayidiin summaa’uu fi kkf.dha. Nama balaan akkasii mudate du’arraa baraaruun hanga gargaarsi ogeessaa argamutti tursuun kan dandaa’amu Hargansuu nam-tolchee kennuufiin ta’a.
Tooftaaleen hargansuu nam-tolcheen beekamoon:
afaaniin afaanii fi funyaanitti, qileensa kennuun ta’a. Tartiibi hordofamuu qabu:
Gargaarsaaf nama waammachuu,
Miidhamtichi ofbeekuu (conscious) fi dhiisuu isaa mirkaneeffachuu,
Afaannii fi/ykn funyaani suddoowwan irraa bilisa ta’uu mirkaneeffachuu,
Mataa miidhamaa boodatti deebisuun hareeda isaa ol qabuun dugdaan ciibsuu,
Gidduu gidduun dhaggeeffachaa afaaniin afuura kennuufii itti fufuu,
Akka miidhamaan harganuu eegaleen gargaarsa dhaabuu.
2.3 Sirna Marsaa Dhiigaa
Sirni kuni qaama keessatti dalagaalee ijoo armaan gadi raawwata:
Soorata bullaa’e, qoricha, farra qaama alagaa, hormonoota, O2 , naannoo qaamaa hundatti raabsuu.
Xurii qaama keessa jiran hundumaa baasuuf (fkn; CO2 , yuuriyaa,)
Ho’a qaama keessa tamsaasuuf
Dhukkuba ittisuuf fi kkf dalaga.
Orgaanizimoota seel-qeenxee keessatti dalagaaleen kun difiyuushinii salphaatiin raawwachuu kan danda’amu yommuu ta’u orgaanizimoota seel-hedduun garuu dabalataan sirna walxaxaa seelota hundaa uwwisuu danda’u qabaachuun dirrqama. Kanaaf, orgaanizimooti seel hedduun sirna geejibaa walxaxaa qabu. Sirni kun sirna marsaa dhiigaa jedhama. Qaamoleen sirna kanas; onnee, ujummoolee dhiigaa fi dhiiga.
2.3.1 Caasaa fi dalagaa ujummoolee dhiigaa
Sirn a marsaa dhiigaa keessatti wanti guddaan daandii geejjibi wantootaa ittin raawwatuu dha. Sirna kana keessatti daanndiin kun ujumoolee dhiigaati. Nama keessatti ujumoolee dhiigaa gosa sadiitu jiru: aarterii ykn ujummoo dhiiga raabsituu, veeyinii ykn ujummoo dhiiga deebistuu fi kaapilaarii. Aarterii fi veeyiniin mata matan baqqana sadi sadii yommu qabaatan kaapilaariin baqqana , indooteeliumi (endothelium) qofa qaba. Baqqanonni kunis;
Indoteliyeemii – baqqana keessaa
Tuunikaa meediyaa (tunica media)- baqqana gidduu , kirrii dhifamanii bakkatti deebi’uu danda’an (elastic fibers) irra kan ijaarame.
Tunikaa eksterna (tunica externa)- baqqana alaa, kirrii dhifamanii bakkatti deebi’uu hin dandeenye (elastic fibers) irraa kan ijaaramedha. Caasaa fi dalagaan ujummoolee kanaa gabatee
2.3 keessatti walbiraqaban agarsiifamee jira.
Gabatee 2.3 Walbira qabaan ilaaluu caasaa fi dalagaa ujummoolee dhiigaa sadan
Haala Aarterii Veeyinii kaapilaarii
Kallatti dhiiga geejjibuu gara qaamotaatti gara onneetti Aarteriirraa gara veeyiniitti
Furdina baqqana Tuunikaa furdaa Haphii Hin jiru, tishuu epitaliyaalii qofa.
Uutuu gamis baatii Hundee awortaa fi palmonaarii aarteriirra qofa jira Qabu Hin qaban
Dhiibbaa dhiigaa Ol aanaa xiqqaa Baayyee gad bu’aa
Reetii paalsii Ol aanaa xiqaa Baayyee gad bu’aa
Saffisa yaa’uu dhiiga baatani ariifataa Suuta Baayyee suuta
Qabee dhiiga baatanii muraasa Baayyee ol aanaa Ol aanaa
Qabiyyee dhiiga O2 niin Badhaadhaa (p.aarterii malee) CO2 niin badhaadhaa (p. veeyinii malee) O2 fi CO2 walmadaalu qabu
Bakka ka’umsaa Onnee Dhuma fiixee kaapilaariirra Dhuma fiixee aarteriirraa
Damee Inni guddaan awortaa; inni xinnoon artiriyoolii jedhama Inni guddaan vanakaavaa; inni xinnoon immoo aartiriyoolii jedhama Hin qabu
2.3.2 Caasaa fi dalagaa onnee
Onnen nama tokkoo aboottee isaarra/isheerra kan hin caalle yommuu taatu, somba lamaan gidduutti gara bitaatti siquun argamti. Onneen namaa akka waliigalaatti:
Alaan membireenii cimaa periikaardiyeemii jedhamuun uwwifamtee argamti. Keessan tishuu cimaa seeptam jedhamuun bakka lamatti: kutaa bitaa fi kutaa mirgaatti qoodamtee jirti.
Kutaan gara mirgaa dhiiga dii’oksijineetidii (O2 nii muraasa, CO2 baayyee) yommu qabatu inni bitaa immoo dhiiga oksijineetidii (CO2 muraasa, O2 baayyee) qabata.
Tokkon tokkon cinaachaa goloota lamatti qoodamu; garri olii lamaan oriikiloota/atiriyaa ;
garri gadii lamaan ventiriikiloota.
Dhaaban ventiriikiloota kan atiriyootaarra furdata. Achumattuu, ventirikiloonni bitaa furdinan dhaabaan ventirikiloota mirgaa ni caalu (Fakk.2.5).
Huutuu gosa garaagaraa ofkeessaa qabdi. Huutuu baayikaaspidii – oriikilii fi ventiriikilii bitaa gidduutti kan argamu yommuu ta’u dhiigi ventiriikilii bitaa seene gara oriikilitti bitaatti akka hin deebine ittisa .Huutuu tiraayikaaspidii – oriikili fi ventiriikilii mirgaa gidduutti kan argamu yommuu ta’u dhiigi ventiriikilii mirgaa seene gara oriikilitti mirgaatti akka hin deebine ittisa. Huutuwwan kun lamaan walitti huutuu atiryoo- ventiriikulaarii jedhamu.
Huutuu gamiis-baatii- bu`uura awortaa fi palmonaarii aarteriitti kan argaman yommuu ta’u dhiiga akka of booda hin deebine ittisu.
Fakkii 2.5 Caasaa onnee namaa
2.3.2.1 Makaanizimii dalagaa onnee
Onneen dirirfachuun dhiiga fudhatee, kottonfachuu ofkeessaa dhiiba. Kottonfachuun onnee sistoolii
yommuu jedhamu dirirfachuun immoo diyastolii jedhama. Dalagaa onnee keessatti:
Kottoonfannaa fi diriirfannan oriikilootaa walfaana. Kan ventirikiloottas akkasuma. Garuu, yommuu oriikiloonni kottonfataa jiran ventitrikiloonni dirirfachaa jiru ykn galagalchoo/garagalchoo kanaati.
Rukuttaan onnee/sagaleen onnee kan dhaga’amu sababa kottonfannaa onneen osoo hin taane sababa cufamuu huutuwwan onneeti. Rukuttaa onnee tokko keessa sagaleen lama kan jiru ta’e waliigalaan sekondii 0.8 fudhata. Cufamuun atiryoo- ventiriikulaarotaa , battala kottonfannan oriikilootaa xumuramuun kan dhaga’amu ta’ee , sagalee/rukuttaa duraa ‘lub’ jedhu dhageessisa. Cufamuun huutuu gamis baatii, battala kottonfannan ventirikilootaa xumuramuun kan dhaga’amu ta’ee, sagalee/rukuttaa lammataa ‘dub’ jedhu dhageessisa.
Nama fayyaa ga’eessa boqonnaa irra jiruu keessatti rukuttaan onnee giddu galeessaan daqiiqqaatti 72 ta’a.
Onneen kan kottonfatu ergaa narvii ofii issatiin uumatuun ta’a. Ergaan kun tishuu saayinoo atiriyaal noodi ykn tishuu pees meekerii jedhamuu fi orikilii mirgaa gara olii afan vanakaavaatti siqee jiruun ta’a. Ergaan neervii tishuu pees meekeriin madde oriikiloota walga’ee boodarra gara ventirikilootaatti tamsa’a.
Dhiibbaa onneetiin humni dhiigi dhaabaa aarteii irratti lakkisu dhiibbaa dhiigaa jedhama. Dhiibban dhiigaa guddan kan galmaa’u feezii sistolii irratti yommuu ta’u isheen xinnoon immoo feezii diyaastolii irratti. Meeshaan dhiibbaa dhiigaa safaruuf gargaaru Isfigimomanoomeetirii (sphygmomanometer) jedhama. Meeshaa kanarraa dubbisuun
yommuu barreessi, siistolii irra diyastoolii oolchuu dhaan ta’a. Fakkeenyaaf dhiibbaan dhiigaa nama fayyaa fi ga’eessaa 120mmHg/80mmHg ta’a.
2.3.2.3. Marsaa Dhiigaa
Akka waliigalaatti marsaan dhiigaa gosa lamatu jiru.Isaanis; Marsaa dhiigaa dachaa fi qeenxee dha. Marsaa dhiigaa dachaa keessatti dhiigi marsaa tokko keessatti al- lama onnee keessa darba. Kanaaf, marsaan dhiigaa akkasii feezii lama qaba- marsaa palmoneerii (sombaa fi onnee gidduu) fi marsaa sirnaa (qaamaa fi somba gidduu) ti. Namaa fi allaattota qofaatu marsaa dhiigaa dachaa qabu. Marsaa qeenxee keessatti dhiigi marsaa tokko keessatti al tokko qofa onnee keessa darba.
Dhiiga qaamarraa onnee seenaa jiru irraa yoo kaane marsaa dhiigaa tartiiba armaan gadiin agarsiisuu ni dandeenya (Fakk. 2.6).
(OM-orikilii mirgaa; VM-ventirikilii mirgaa; AP- aarterii palmonarii ;VP-veeyinii palmonarii; OB- orikilii bitaa ;VB-ventirikilii bitaa )
2.3.3 Caasaa fi dalagaa dhiiga
Dhiigi ruuqoolee lama qaba: kutaa dhangala’aa ( pilaazimaa) fi kutaa jajjaboo (seelota dhiigaa). Pilaazimaa dhangala’aa bifa keelloo daalcha kan qabu ta’ee dhiiga keesaa % 55 qabata. Pilaazimaa keessaa %90 bishaan yommuu ta’u, % 10 immoo garee gurguddoo sadan armaan gadii qabatee jira: Pirotinii dhiigaa (Gilobuliini, Albuumiini, faayibirinojinii)
Dhangaalee (gilukoosii, Laaktik asiidii, liipidii, faatii asiidii, albuudota, viitaaminoota) Xurii naayitirojiinii ( yuuriyaa, yirikasiidii)
Pilaazimaa keessatti; bishaanni kan qabatu ta’ee warri hafan hundi(fayibironojinoota, Pirootinoota, lipidsii, amiinoo asiidii, ashaboolee, inzaayimoota, hormoonota, farra qaama alagaa, qaama, alagaa,
yuuriyaa fi kan biroon) %10 qabatu. Pilaazimaan fayibironojinoota hin qabne seerami jedhama. Seelotii dhiigaa akaakuu sadiitu jiru- seelota dhiiga dhiimaa, seelota dhiiga adii fi pilaatileetota. Seelotni kun hundi dhuka lafee keessatti kan uumaman yoo ta’ans garagarummaa muraasa qabu. Garagarummaan kunis haala gabatee armaan gadii keessatti ibsameen agarsiifamee jira.
Gabatee 2.4 Gosoota dhiigaa namaa
Haala Seelii dhiiga diimaa Seelii dhiiga adii pilatileetii
Baayina (mm3 keessatti) 5,000,000 7000 250,00
Dalagaa O2 fi CO2 muraasa geejibuu -farra qaama alagaa qopheessuu -baakteeriyaa liqimsuu Dhiiga dhangala’e itichuu
Niwukilesii Ga’eessi hin qabu (Hoosistootaa fi nama keessatti) Qabu Hinqaban
Umurii Guyyaa 120 Guyyaa muraasa Guyyaa 5-9
Hamma 8-12µm Lamaanuu ni caala 2-3 µm
Boca Baayikonkeevii Garaagara Luggee
Gosa Akaakuu gurguddoolamatu jiru jiru: granuloosaayitii fi agranuloosaayitii.
FAkkii 2.6 Marsaa dachaa namaa
2.3.4 Garee dhiiga namaa
Seelonni hundi dirra isaanii irratti pirootinii addaa qaama alagaa (antigens) jedhamau qabu. Seelonni pirootinii kana gargaaramuun walii isaanii fi seelii alagaa adda baafatatu. Haaluma walfakkaatuun seelonni dhiiga diimaa dirra isaaniirra qaama alagaa (antigen) garaagaraa qabu. Haalli kun namoonni garee dhiigaa garaagaraa akka qabaatan taasisee jira. Sirni garteessuu dhiigaa beekamoon lamatu jiru. Isaanis: sirna dhiigaa ABO fi sirna faaktorii Rh (rhesus factor) ti.
Akka sirna kanaatti dhiigi seelii dhiiga diimaa keessa qaama alagaa gosa lamatu jiru: qaama alagaa A fi qaama alagaa B jedhamu. Akkasumas pilaazimaa dhiigaa keessa farra qaama alagaa (antibody) gosa lamatu jiru : farra qaama alagaa “a”,( kan garee ‘A ‘ tiin oomishamu) fi farra qaama alagaa”b”,
( kan garee ‘B‘tiin oomishamu) jedhamu. Haaluma kanaan akka sirna kanaatti garee dhiigaa afurtu jiru: garee A, B, AB fi O ta’u (Gabatee 2.5).
Gabatee 2.5 Garee ddhiigaa namaa
Garee dhiigaa Qaama alagaa Forra qaama alagaa Garee inni dhiiga irraa fudhatu Garee inni dhiiga Kennuuf
O hinqabu a, b O A, B, AB,O
AB A fi B Hin qabu A ,B ,AB,O AB
B B a (qaama alagaa B kan fittisu/jibbu) O fi B B, AB
A A b (qaama alagaa A kan fittisu/jibbu) A fi O A, AB
Akka sirna faaktorii Rh tti, dhiigi namootaa Rh+ fi Rh– jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Namoota keessaa 85% kan ta’an meembireenii seelii dhiiga diimaa irratti pirootinii rhesus(Rh) jedhamu yommuu qabaatan %15 kan ta’an immoo hin qaban. Namoonni akkasii duraa duubaan Rh+ fi Rh– jedhamu. Namoonni Rh+ ta’an farra qaama alagaa Rh irratti hin qopheessan, warri Rh– garuu ni qopheessu . kanaaf, sirna kana yommuu xiyyeeffannu nami Rh– dhiiga nama Rh– ta’e qofaarraa yommuu fudhatu nami Rh+ ta’e garuu nama Rh gosa kam qaburraa iyyuu fudhachuu ni danda’a.
Qorannoo dhiigaa booda sirn lachuu walitti fiduun haala armaan gadiin ibsina:
2.3.5 Dhukkuboota marsaa dhiigaa
Dhukkuboonni marsaa dhiigaa beekamoon aneemiyaa (hir’ina dhiigaa) fi dhiibbaa dhiigaati.
Aneemiyaa – Sababni aneemiya gosa garaagaraatu jiru:
xiqqeenya oomisha heemogiloobinii hanqina aayireenii, vitamin B12 , vitamin C fi foolik asiidiirra madduu dha. –
dhangala’uu dhiigaaa (heemofiiliyaa)
caccabuu /manca’u seelota dhiiga diimaa (Summii bofaa, summii ginxii, summii mashroomii, busaa,)
boci heemoogilobinii mudaa qabaachuu/hokkoo ta’uu(sickle cell anaemia?)
Kitaaba wabii dubbisuun ykn ogeessa fayyaa gaafachuun sababoota dhiibbaa dhiigaa fi mala ittisa isaa ibsi.
Heemoogilobiniin boca hokkoo qabaachuun isaa haala kamiin sirna marsaa dhiigaa danqa?
2.4. Sirna Narvii
Sirni naarvii seelota addaa dalagaa armaan gadii qaban irraa kan ijaaramee dha.
Rifachiisoo naannoo irraa fudhachuu. Kun orgaanizimoota seel-hedduu keessatti seelota narvii addaa sirbiduu (receptors) jedhamaniin raawwata.
Rifachiisoo gara erga elektirikaalaatti jijjiiruu. Adeemsi kunis tiransidaakshenii
Erga elektirikaalaa qopheessan sadhataan bakka fagoo, raawwattoota (effectors) jedhamanitti dabarsuu. Raawwattoonni xannachootaa fi mashaalee qaamaa ta’anii kan deebii sirni neervii wiirtuu qopheesse raawwatanii dha.
2.4.1 Caasaa Niwuronii
Niwurooniin bu’uura caasaa fi dalagaa sirna narviiti. Tokkoon niwuroonii kutaalee sadii qabdi(Fakk. 2.7).:
Qaama seelii – kutaa niwuronii dhiita’aa ta’ee kan niwukilesii niwuronii fi organeloota biro qabatee jiruu dha.
Dandiraayitii /miigoo niwuronii- dameelee baayyee, gaggabaaboo gama tokkoon qaama seeliitti qabatanii jiranii dha. Dandiraayitiin chaaneloota ergaa neervii gara niwuroniitti seensisanii dha.
Aaksonii /ulee niwuroonii – damee qeenxee, dheeraa gama tokkoon qaama seeliitti qabatee jiruu dha. Aaksoniin chaanela ergaa neervii qaama seelii irraa gara niwuronii birootti ykn raawwattootatti geessuu dha. Niwuronoota baayyee keessatti kan deggersa soorataa taasisuuf seelota niwuronii biro isaan aguuguun jiranii dha. Seelota kana keessa
warri beekamoon lamaan, seelota shiwaanii (Schwann cells)fi oliigoodendirosayitoota (oligodendrocytes). Niwuronoota baayyee keessatti seelonni kun uwwisa coomaa qopheessuun aaksonii aguuganii argamu. Uwwisi coomaa kun maayilen shiiz (myelin sheeth) jedhama. Qaami aaksonii darbee darbee uwwisa kana hin qabu. Bakki qullaan kun dhiita Raanveeyir (node of Ranvier) jedhama . Ergaan narvii dhiita tokkorraa gara dhiita itti aanuutti utaaluun ariitiin saffisa. Kanaaf niwuronoonni uwwisa kana qaban hariitii guddan ergaa daddabarsu.
Fakki 2.7 Caasaa niwuronii
2.4.2 Gosoota Niwuronii
Niwuronoota haala garaagaraan ramaduu dandeennya: Fkn; dalagaan, bocaan,
Dalagaa dhaan niwuronoonni bakka sadiitti qoodamu: Niwuroni miirawaa, motoraa fi gamteessituu
Seelota narvii qaamolee miiraa qofa keessatti argama.
Dhaamsa narvawaa qaama miiraa irraa gara sammuu ykn ispaayinaal koordiitti geessa.
Qaamota miiraa keenya sammuu wajjin walquunnamsiisa.
Niwurononni mirawwon qaama seelii SNW alatti qabu. Narvii keessatti waliti qabani qma aaseelii kun dhiita gangiiliyaa (qenx.) gangiiliyoo (bay.) jedhamu mul’isa.
Sammuu keenya maashaa fi xannachootaa wajjin walquunnamsisa.
Qaami seelii isaanii sirna navii keessatti argama
Sirna narvii wiirtuu keessatti niwuronota miirawaa fi mootoraa walitti gamteessa.
Yeroo hundaa sirna navii keessatti argamu.
Niwuronoonni boca isaaniin bakka sadiitti garteeffamu: malti-poolaarii , yuunii-poolaarii fi baayi-poolaarii(Fakk.2.8 ).
Malti-poolaarii- qaami seelii isaanii denderaayitoota baayyee uumata, fkn: niwuronoota gamteessituufi mootorawaa keessatti.
Yuunii-poolaarii -aksonii fi denderaayitii qeenxee ta’un qaama seelii bakka garaagaraa iirra uumamu qabu, fkn: niwuronoota miirawoo tokko tokko.
Baayi- poolaarii – aksonii fi denderaayitiin qeenxee; qeenxee ta’un qaama seelii bakka tokkorraa iirra uumamu, fkn: niwuronoota miirawoo tokko tokko.
A= miigoo (denderaayitii ) B=qaama seelii C=aksonii
Fakkii 2. 8 Boca garaagaraa niwuroonota keessatti (1)baayipoolaarii, (yuuniipoolaarii) (3)malti poolaarii
2.4.2. Walitti hidhamiinsa niwuronii
Daddabarsuu ergaa narvii keessatti niwuronoonni ykn niwuronoonnii fi raawwattoonni qaaman wal hinxuqan, bakka xiqqootu gidduu isaanii jira. Bakki kun saayinaapsii jedhama. Niwuroniin saayinaapsii dura jiru duree saayinaaptikii yommuu jedhamu; inni booda jiru immoo duubee saayinaaptikii jedhama. Niwuronota fuuncaan jiran keessatti niwuroniin saayinaapsii isa tokkoof duree ta’e isa itti aansee jiruf immoo duubee ta’a.
Fkn: niwu.1——-sayinapsi1——niwu.2—-sayinapsi2————— niwu3 niwu.1- duree say.; niwu.2-
duubee say.; niwu3-duubee say. Niwu.2 – sayinapsi1f duubee dha sayinapsi2 garuu duree dha.
Qudoon seelota narvii (niwuronii) aguugii tokko jalaa narvii jedhama. Neerviin baayyeen niwuronoota miirawoo fi mootoraa qabatanii jiru. Isan kun nervota makamoo jedhamu. Narvoti murasi niwuronoota miirawoo qofa qabatani jiru, fkn: Narvii olfaaktorii, narvii optikaalii . Narvoni niwuronoota miroo hin bqaabne neervii mootra jedhamu.
2.4.3 Kutaalee Sirna Narvii
Sirni narvii sirna narvii wiirtuu (SNW) fi sirna narvii moggaa (SNM) jedhamuun bakka lamatti qoodama. SNW sammuu fi ispaayinaal koordii kan qabatee jiru yommuu ta’u, SNM immoo neervota SNW seenanii fi ba’an hunda qabatee jira.
2.4.3.1. Sirna narvii wiirtuu
A. Caasaa fi dalagaa sammuu
Waan namni dalagu hunda: ogummaa, dandeettii ,nyaachuu, rafuu, jaallachuu, qaroomina fi kkf abbummaan kan to’atu sammu dha. Sammun alaan lafee buqqee mataa iskaalii; keessan immoo membireenii meninjaayitii jedhamuun haguugamee jira. Sammuun guutummaatti, akkasumas ispayinaalkoordiin, dhangala’aa qulqulluu dhangala’aa seero-ispayinali jedhamuun qabamee jira.
Muraa dalgaatiin (cross sectionally) yommuu ilaalamu sammuun kutaa lama qaba: qaamni xiilloo gara alaatti , qaamni adiin immoo gara keessatti argama. Sammuun zoonota gurguddoo sadiitti qoodama:
Zooniin dureen caasaalee sadii qabatee jira. Isaanis : talamasii,haayipootalamasii fi sereebireemii qabatee jira.
Talamasiin – wirtuu duree sammuutti kan argamu ta’e dalagaalee kan akka: dhaamsa miirawaatti hiikka kennee gara kutaa korteksii serebiraalii isa ilaallatuutti dabarsa.
Haayipotalamasiin – jala talamasiitti kan argamu ta’e dalagaalee kan akka: to`annaa ho`aa, madaala bishaanii , beela, dhiibbaa dhiigaa, kkf, raawwata
Sereebireemiin – dalagaa lee kan akka yaadachuu, baraachuu, xiinxaluu keessatti hirmaata
Zooniin dubee sammuu caasaalee kan akka : serebilamii, poonsii fi medullaa obolongaataa
Meduullaa olongaataa – Dalagaalee kan akka: Dha’annaa onnee sirreessuuf , Hariitii fi humna rukuttaa onnee sirreessu, Hariitii fi gad-fageenya hargansuu to’ataa, Dalagaalee kan akka dubbii,
qufaa, haxxisoo, gorooruu, balaqqamuu, cuunfaa garaachaa fi mar’ummanii qopheessuu, sochii arrabaa fi mataa hordofa.
Poonsii/Pons/: Dalagaalee kan akka: ergaa hundee sammuu keessa olii fi gadi, hundee sammuu fi serebileemii gidduu deddeebisa, wiirtuu gochaalee kan akka hirribaa, dhaga’uu, madaallii, dhadhammii, sochii ijaa, fuula ifaa, harganuu, liqimsuu, to’anna afuuffee fincaanii, boqqonnaa fi dhaabbii qaamaa to’ata.
Zooniin gidduu sammu gidduu sammuu qabatee jira.
Gidduu sammuu – dalagaa kan akka to’annaa sochii, waransaa/dhukkubbii, xiyyeeffannaa ilaaluu, rifu liphii dhageetti to’ata.
A. Ispaayinaal koordii
Bocan ujummoo ta’e medullaa obilongaataa irraa eegaluun gara teessuutti kan gadi dheeratuu dha. dheerinna waligala naannoo mm 430 fi furdina naannoo mm20 qaba. Muraa dalgaatiin yommuu ilaalamu, keessi boca qubee’ H’ qabaatee halluun xiilloo yommuu ta’u alli immoo adii dha (Fakk.2.9). Maddi halluu xiillo kana qaamolee seelii niwuuroonota gamteessituu fi motoorawaa gobbinaan gara keessaa jiraachuu agarsiisa. Maddi halluu adii immoo aksonoonni niwuronii baayinaan alaan argamuu isaanii agarsiisa.
Fakkii 2.8 Caasaa muraa dalgaa ispaayinalkoordii
2.4.3.2 Sirna Narvii Moggaa (SNM)
Narvota sammuu fi ispaayinaal koordiitti hidhamanii jiran hunda qabatee jira. Narvonni sammuutti hidhamanii jiran narvota sammuu ykn narvota kiraayinaalii yommuu jedhaman warri ispaayinaal koordiitti qabatanii jiran immoo neervota ispaayinaalii jedhamu. Narvonni kiraayinaalii lakkoofsaan cimdii 12. Fkn.
Cimdiin I ffaa; Narvii olfaaktorii Gosa neerviin- hundi miirawoo dha. Dalagaan – urguffaa
Ka’umsaan – olqa funyanii Cimdiin II ffaa- Narvii optikii
Gosa narviin – hundi miirawoo dha Dalagaa – arguu
Ka’umsaan – Retina
Narvonni ispaayinaalii immoo cimdii 31. Qeenxeen 31 karaa boodaa, qeenxeen 31 immoo karaa fuduraa ispaayinaal koordiitti qabatanii yommuu argaman duraa duubaan hundee duubee fi hundee duree jedhamuun waamamu. Narvonni hundee duubeen naarvota mirawoo yommuu ta’an warri dureen immoo narvota mootoraati.
Haata’u malee SNM dalagaa dhaan bakka lamatti qoodamu : SNM miirawoo fi SNM mootoraa ti. Tokko tokkoon isaanii deebi’uun damee sometikii fi damee veseraalii jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Dameen SNM mootoraa veseraalii deebi’uun damee lamatti qoodamu: simpatatikii fi parasimpataatikii. Simpataatikii fi paraasimpataatikii walitti sirna neervii addaa uumu. Sirni narvii kun sirna narvii of- danda’oo (Autonomus Nerve System) jedhamu. Dameen simpatatikii haala muddama, sodaa fi dhiphinaa keessatti qaama deebiif (sochiif, lolaaf, baqachuuf) qopheessa. Dameen paraasimpataatikii haala nagaa fi tasgabbii keessatti qaamni cal- akka jedhu jajjabeessa.
2.4.4 Gochaa rifuu liphii
Gochaan rifuu liphii, rifachiisoof deebisa battalaa fi ariifataa kan kennan ta’anii amala armaan gadii qabu:
Rifachiisoof deebi’i fedhiin ala kennuu .
Orgaanaizimii balaa, rifachiisoon fiduu irraa oolchuu.
Sirna narvii keessatti marsaa salphaa uumu.
Barnootaan hin argaman /muuxannoon hin argaman
Dhaabbataa dha /bifa walfakkaatuun raawwata(Stereotyped) – sanyii tokko keessatti yeroo kami iyyuu bifa wal-fakkaatuun raawwata. Fkn. Yeroo nyaata arginu /foolii fuunu gororuu, yoo funyaanni horfame haxifachuu.
2.4.4.1 Marsaa rifuu liphii
Daandiin daddarba ergaa neervii gochaa rifu liphii keessatti marsa rifuu liphii jedhama. Marsaan kun ruuqoolee 4 ykn 5 hirmaachisu. Isaanis : sirbiduu miirawaa, niwuronii lama ykn sadii , sammuu ykn ispaayinaal koordii fi raawwattoota. Marsan rifuu liphii niwuronii lama (mirawaa fi mootora) ykn sadanuu hirmaachisu. Fakkeenyaaf; roqomuun jilbaa niwuronii lama (baayiniwurali) yommuu hirmaachisu; miilli qoree irraa butachuu, quba ibdarra butachuu, fi kkf immo niwuroni sadan (tiriniwurali) himachisu.
Gochi rifuun liphii sammun qindeeffamu rifuu liphii kiraniyalii jedhama. fkn: ija libsachuu, haxiffachuu. Gochi rifuun liphii ispaayinaalkordiin qindeeffamu immoo rifuu liphii ispaayinaalii jedhama.
2.4.5. Daddarba ergaa neervii fi niwurotiranismiterii
Ergaan neervii saayinaapsii keessa darbuun niwuronii ykn raawwataa bira ga’a. Membireeniin duree saayinaptikii maayitookondooriyaa fi vesikiloota saayinaptiki hedduu qabatee jira. Vesikilonni kun kemikaala dabarsaa ergaa narvii ykn niwurotiranismiterii (niwurotransmiter) jedhamuun waamamu qabu. Niwurotiranismiterin karaa holqa sayinaapsii ergaan neervii niwuronii iraa gara niwuronii birootti ykn gara raawwattootaatti ykn seelota miirawoorra niwuronoota miirawwootti dabarsu.
Vertaabireetota keessatti niwurotiranismiterii beekamoon asetaayilkolinii fi noradrenaalinii dha. niwuronoonni asetaayilkolinii fi noradrenaalinii burqisiisan dura duubaan kolinerjikii (choliergic) fi adireenerjikii (adrenergic)
Batala ergaan neervii fiixee duree saayinaptikii ga’en, membireeniin ayonii Ca+ maddisiisa. Ayoniin kun vesikilii fi membireeniin sayinaptikii akka wal xuqan taasisuun adeemsa eksoosaayitoosisiin niwurotiranismiterii maddisiisa. Niwurotiranismiterii saayinaapsii keessa dhangala’uun dubee saayinaaptikiitti ce’uun simannaa ergaa neerviif haala mijeessa.
Dalagaa isaanii erga raawwatanii booda niwurotiranismiterini battaluma membireenii duree saayinaptikiitti xuuxamuun ,diffuushinii fi inzaayimootaan caccabuun badu. Fakkeenyaaf assetaayilkoliniin inzaayimii kolineestirase (cholinestrase) jedhamuun caccaba.
Yeroo ergaan neervii darbaa jiru jijiiramni chaarjii /potenshaalli elektirikaalaa keessaa fi ala meembireenii niwuronii irratti mul’atu potenshaalaa gochaa ykn ergaa neervii ykn Potenshaalaa meembireenii jedhama.
Yeroo kana alli negative (Na+ muraasa; K+baayyee) yommuu ta’u keessi immoo poseetiva (Na+ baayyee; K+ muraasa). Kana jechuun yommuu ergaan daddarbaa jiru Na+ gara keessatti sesseenuun, K+ immoo gara alaatti babba’uun ergaa gara fiixee aksoniitti qajeelchu. Haalli niwuronichaa immoo diipolarizidii jedhama.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ – – – – -_ _- _ – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ – _ _ _ –
_ _ _ _ _ _ _ _ _ – – – – -_ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ – _ _ _ –
Yeroo niwuroniin boqonnaarra jiru jijjiiramni poteenshaalaa keessaa fi ala meembireenii niwuronii irratti mul’atu immoo potenshaalaa boqonnaa ykn tasgabbii jedhama.
keessi membirenii negative (Na+ muraasa; K+baayyee)’ alli membirenii immoo posetiva (Na+ baayyee; K+ muraasa) ta’a
osoo galvaanoometiriitti keessaa fi alatan qabsiifamee keessi membirenii ala waliin yeroo madaalamu pooteenshaalii -80 mv (millvolt) agarsiisa.
Membireniin yeroo kana poolaaraayizidii ta`e jedhama
Feezii polaraayizdii irraa gara diipolaraayizdiiti jijjiramuun immoo riipolaraayizeeshenii
2.4.6 . Qoricha seeraan ala fayyadamuu fi sirna neervii
Nyaata alatti kemikaalli qaamatti fudhatamuun dalagaa qaama namaa irrati dhiibbaa geessisu qoricha jedhama. Qoricha seeraan ala fayyadamuu jechuun gochaalee kan akka hamma ajajamee ol fudhachuu, ajaja ogeessaa malee qoricha fudhachuu,ykn qoricha seeraan dhorkaman warra akka marju’aanaa, kokeeyinii, herooyinii,kkf fudhachuu dha. Qoricha seeraan ala fayyadamuu hirkattummaa fizikaalaa fi fiziyoloojikaalaa qaqqabsiisa. Dhiibbaan qorichoonni kun fidan kallattii garaagaraan eerama. Fkn:
Dalaga qaama hariifachiisuu; kanneen kana si’eessitoota (stimulant) jenna.
Dalaga qaama muusessuu amala callisuu fidu; kanneen kana muusessitoota (depressant) jenna.
Kallattii miira waa yaaduu jijjiiruun; kanneen kana haluusinojinoota jenna.
Walumaagalatti akkataan si’eessitoota (stimulant) fi musessitoonni dalagan sirna neervii irratti dhiibbaa geessisan haala armaan gadiin cuunfamee dhiyaate jira.
Oomishamuu niwurotiranismiiterii ittisuu,
Gad-lakkifamuu niwurotiranismiiterii ittisuu,
Miigoo niwuronii akka niwurotiranismiterii hin simanne ittisuu,
Niwurotiranismieriin dalagaan booda akka hin mancaane ittisuu,
niwurotiranismiterii aksoniitti hidhuun
niwurotiranismiteriin darbaan akka oomishamu gochu,
niwurotiranismiterii of fakkeessuun niwuroniitti dhi’aachuun ta’a.
2.5 Qaamota Miiraa
2.5.1 Rifachiisoo fi Kulkulfannaa
Beneldonni haalota garaa garaa kan akka soorata argachuuf, michuu saalaa barbbaadachuuf, diina jala baqachuuf, fi kkf keessatti odeeffannoo barbaadu. Akkasumas haala naannoo isaanii kan akka ifaa, ho’aa, dhiibbaa fi foolii beekuuf odeeffannoo argachuu qabu. Odeeffannoon argame dalagaa fi gochaa isaanii irratti jijjiirama fida. Odeeffannoon akkasii kun Rifachiisoo jedhamu. Rifachiisooti deebisa kennuu fi dandeettiin deebisa kennuu kun immoo kulkulfannaa jedhama.
2.5.2 Seeloata Sirbiduu
SNW waa’ee haala naannoo odeeffannoo walIigalaa (keessaa fi alaa) kan argatu seelota addaa
sirbiduu miirawoo jedhamanii ta’a. Sirbidoonni miirawoon haala sadi’iin ramadamu:
Akaakuu rifachiisoo adda baasaniin
Madd a (ka’umsa ) rifachiisoon.
Seelonni sirbiduu haala walxaxiinsa isaaniin Sirbidoota jalqaba (Primary receptors) ykn sirbidoota waliigalaa fi siirbidoota miiraa wal xaxoo jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Sirbidooti jalqaba miigoo niwuronii isaaniin rifachiisoo adda baasuutti (ergaa narvii uumuutti ) gahoo warra ta’anii dha. sirbidoonni kun kallatiin ergaa gara SNWtti ergu. Sirbidoota gogaa, fakkeenyaaf, sirbidoota waliigalaa garaagaraa qabatee jira (BSc 102 yaadadhu)
Siirbidoota miiraa wal xaxoo keessatti miggoon niwuronii isaanii kallattiin gara SNW kan dhaqu osoo hintaane, kallaattiin niwuronoota miirawoon wal-quunnamu (synapsed). Kanaa booda ergaan neervii karaa niwuronoota miirawoo SNW qaqqaba. Fkn: sirbidoota qaama miiraa beekamoo. Seelonni sirbiduun gosa rifachiisootin akka armaan gadiitti qoodamu(Gabatee 2.6).
Gabatee 2.6 seelota sirbidoo bu’uura gosa rifachiisootiin
Sirbiduu Gosa annisa rifachiisoo Uumama rifachiisoo
Sirbiduu ifaa Elektiroo maagineetii Ifa
Sirbiduu elektironii Elektiroo maagineetii Elektirisitii
Sirbiduu makanika Makanikala Ifa,tuqaatii dhiibbaa, harkisaa
Sirbiduu ho’aa Ho’a Jijjirama tempitecheraa
Sirbiduu kemikaala Kemikaala Jiidhina, foolii dhadhammii
Seelonni sirbiduun haala madda (ka’umsa ) rifachiisoo irratti hunda’uun immoo haala armaan gadiin ramadamu.
Inteero-septeerii (Interoceptors) – rifachiisoo keesaa kan miira waraansaa, dhiibbaa adda baasu
Piro-priyo ceptorii ( proprioceptors) – haala dhaabbii ,ulfaatinaa, dabuu fi sochii qamatti miirawoo warra ta’anii dha. Isaan kun maasha, buusaa fi ribuu keessatti argamu.
Ekistiroseeptorii (Exteroceptus) rifachiisoo alaatti miirawoo warra ta’anii dha. Warra akka sirbidoota ijaa, gurraa, funyaan, waraansa gogaa, …kkf.
2.5.3. Qaamoota miira namaa gurguddoo
1 caasaa fi dalagaa ija
Qaama miiraa kan waa’ee fageenyaa, kallattii hammaa, halluu, sochii fi haala biro irratti odeeffannoo kennuu dha. Kubbaan ija namaa diyameteriin mm24 kan dheeratu taatee ruuqoolee 3 kan qabuu dha (Fakk.2.9). Isaanis ;
Baqqanota ijaa sadan (ala, gidduu, keessa) kan dhaabaa ijaa ijaaran
Ruuqoolee optikaalaa kan ifa keessatti dabarsan
A. Baqqanota ijaa
Baqqana alaa- Iskileeraa fi koorniyaa
Iskileeraa/adii ijaa – cimaa fi ija akka waligalatti hammatee fi ittisee kan jiruu dha.
Korniyaa- kutaa iskileeraa fulduraan jiruu dha. Koorniyaan tiranispaarenti i waan ta’ef ifa dabsuun keessatti dabarsa.
Baqqana gidduu- koroyidii, qaama siilariI fi aayirisii /murteessoo ifaa qabatee.
Koroyidii- ujummoolee dhigaa baayyee fi halluu guraaha qaba.
Aayiriisii –ijaaf halluu (cuquliisa, boora) kenna; walakkaa aayirisiitti qaawwi argamtu gartuu jedhamti. Qaawwi kun karaa ifi ija seenuu dha. Duuba agartuu leensii ijaatu jira. Aayiriisiin hamma ifaa ija seenuu to’ata. Kana jechuun, cimina ifaa irratti hunda’uu dhaan dheerachuu (ifa cimaaf) ykn gabaabbachuu (ifa laafaaf) danda’a. Dheerachuun aayirisii bal’achuu agartuu yommu fidu gababbachuun aayirisii immoo dhphachuu agartuun fida.
Qaama siilaarii – maasha aayiriisiin (ligamentii rarraastuun) itti qabatee jiruu dha Baqqana keessaa – Retinaa fi neervii optitikaalaa
Retiinaa- sirbidoonni ijaa kan argaman retina keessatti sirbidoonni kun gosa 2 tu jiru. Seelota geengoo fi seelota ulee jedhamu. Gar aagarummaan seelota kanaas:-
Seeloa ulee( Boca ulee) Seelota geengoo (Boca geengoo)
Ni baayyatu Muraasa
Facaatiin isaanii wal-qixa Dhooqa retina keessatti baayyatu
Ifa laafaan (halkan) rifatu; miirawun olaanaa dha Ifa cimaan (guyyaa) rifatu miirawun gad-aanaa dha
Haalluu adda hin baasan Halluu adda baasuu
Gosa tokko qofa Gosa 3: cuquliisa, magariisaa fi diimaa
Fakkii 2.9 Caasaa ija namaa
B. Optikaalaa ijaa
Caasaalee kan akka koorniyaa, aqiwus humorii, leensii fi virtiros humorii hammata. Caasaaleen kun ifa dabsuun fi dabarsuun fakkiin ratiinaa irratti akka uumamu taasiisu
C. Niwuraalii ijaa
Sirni kun retina fi neervii optikaa qabatee jira.
2.5.3. 2 Caasaalee Gargaaroo Ijaa
Ruuqoolee sadan arman olitti eeramaniin alatti iji caasaalee gargartota armaan gadii qaba.
Qadaadduu ijaa- ija uwwisuu, ittisuu fi jiisuuf gargaaru.
Xannacha laakirimaalii- dhangala’aa ija jiisuu maddisiisa. Dhangala’aan kun %99 bishaan yommuu ta’u %1 iimmoo ashaboo fi kemikaalota baakteriyaa ajeesan, laayizoozaayimii jedhamu ta’u.
Konjaktivaa – moora keessa aguugduu ijaa fi fuldura ijaa (korniyaa malee) uwwisee jiru dha.
Nyaara ijaa- dafqaa fi bishan ijarra qoluuf
2.5.3. 3 Akomodeeshenii
Al-tokkotti wanta dhi’oo fi fagoo arguu hin dandeenyu. Leensiin ijaa dandeettii of-jijjiiruun wantoota fageenya garaagaraa irra jiran (yeroo garaagaratti) akka arginu nu dandeessisu qabdi. Dandeettiin leensii kun akomodeeshenii jedhama. Adeemsa akomoodeshenii keessatti kan qoodaa fudhatan leensii, ligamentii rarraastuu fi maashaa siilariiti. Kana jechuun:
Waan fagoo ilaaluuf:-
Maashaan siilaarii ni diriirfatu, ligamentonni rarraasuun ni muddamu (ni furdatu)
Kun immoo leensii qallisuun waan fagoo ilaaluuf haala mijeessa. Waan dhihoo ilaaluuf immoo galagalchoo haala kannaatu raawwata.
2.5.3. 4 Mudoo ijaa
A. Qaroo dhihoo [ myopia]
Haala – waan dhihoo malee fagoo arguu dadhabuu dha. Fakkiin wanta fagoo vitiros humorii keessatti uumamuu dha
Sababa – kubbaan ijaa dherachuun.
Sirreessuu – leensii konkeevii kan ifa fulduratti facaasu (dheeressuu) godhachuu.
B. Qaroo fagoo (Hypermetropia)
Haala – waan fagoo malee dhihoo arguu dadhabuu. Fakkin wanta dhiyoo retiinaa boodattii uumamuu dha
Sababa –kubban ijaa gabaabbachuu ykn leensiin dheerachuu fi gababachuu dadhabuun Sirreerssu – leensii konveeksii kan ifa fulduratti facaasu (dheeressuu) godhachuu
Haala – ifa kallattii garagaraan ija seenu ratiinaa irratti fakkii uumuu dadhabuu Sababa – leensii fi korniyaan boca killee qabaachuu (boca isfirikaalaa dhabuu) Sirreerssu – leensii silindrikaala fayyadamuu.
2.5.3. 5 Fakkii uumuu fi arguu
Adeemsi arguu kan eegaluu yommuu ifi ija seenu fakkii retinaa irratti uumuu dha. Uumamuun fakkii dabuu ifaa (refraction) irratti kan hunda’e dha. Ifi caasaalee optikaalaa ijaa kessa daddabuu dhaan edda darbee booda retinaa irratti fakkii sirrii, xinnoo fi gombifamaa uuma. Fakkiin uumame kun
ergaa neervii maddisiisa. Ergaan sammuu bira karaa neervii optikaa ga’a. Sammuun ergaa isa qaqqabe adda baasuun miira arguu uuma.
2.5.3. 6 Halluu arguu
Vertaabireetonni halkanii hedduun seelota ulee kan qaban yommuu ta’an vertaabireetonni guyyaa hedduun immoo seelota geengoo waan qabaniif halluu arguu danda’oo dha. Haa ta’u malee, naamoonni muraasi seelota geengoo sadan (cuquliisa, diimaa fi magariisa) keessaa tokko dhabuu danda’u. Halli kun jaamina halluu qaqqabsiisaa. Jaaminni halluu, halluu addaan baasuu dadhabuu yommuu ta’u inni beekamaan jaamina halluu diimaa- magariisaati. Kunis, diimaa fi magariisa adda baasuu dadhabuun akka tokkootti ilaaluu dha.
.1 Caasaa fi dalagaa gurraaGurrii qaama miiraa seelota sirbiduu sagalee fi madaallii qaamaa (harkisa dachee fi sochii qaamaa) miirawoo ta’an qabatee jira:Sirbiduun sagalee kan argamu – kokiiliyaa keessattiharkisa dachee kan argamu – vestibulee (Saakulee fi Atrikelii) keessattisochii mataa kan argamu – ujummoolee yaa’a martoo sadan keessatti
Gurraa Namaa kutaalee 3 qaba:- ala, gidduu fi keessoo gurraati (Fakkii 2.10).
Alli gurraa caasaalee lama qabatee jira: Ujummoo ala gurraa fi Piinaa (waakkoo gurraa).
Gidduu gurraa- holqa qilleensaan guute ta’ee caasaalee sadi qabatee jira: osiikiloota (lafee gadduumaa, boraatii fi faanaa), dibbee gurraa fi ujummoo usteechiyaanii ti.
Keessoon gurraa lafee mataa keessatt kan argamu ta’ee, dhangala’aan kan guutee dha. dhangala’aan kun periiliimfii jedhama. Keessoon gurraa caasaalee sadii of keessaa qaba: kokiliyaa ,meeshaalee vestibulaarii (Yaa’a martoo sadanii fi vestibulee) fi neervii dhageettiiti.
Fakkii 2.10 caasaa gurra namaa
2.5.4 .2 Tooftaa dhaga’uu
Tartiibi adeemsa dhaga’uu haala armaan gadiin raawwata:
Hollannaa → lafee gurraa → foddaa geengee → kokiliyaa → jeeqamu seelota ergaa neervii (seelota rifeenseen) → neervii dhageettii → sammuu –sagalee hiikuu
2.5.4.3 Tooftaa madaallii qaamaa
Tartiibi adeemsa madaallii qaamaa haala armaan gadiin raawwata :
Sochii qaamaa → jeeqamu seelota meeshaalee vestibulaarii (maakullee vistibulee, seelota rifeensaa yaa’a martoo) → uumamu ergaa (neervii seelota meeshaalee vertibulaariin) →neervii vestibulaarii
→ sammuu →dhaabbii qaamaa sirreessuu.
Arrabi qaama miiraa dhamdhamuuti. Wanti dhamdhamamu kam iyyuu bifa bulbulamuu danda’uun arraba tuquu qaba. Kuskuseewan arrabaa rifachiisoo kemikaalaa nyaata keessa jiran adda baasuu keessatti ga’ee guddaa qabu. Kuskuseewwan afaan keessa kallattii garaagaraarra dirra arrabaa, dhaabaa qonqoo gara boodaa , toonsilii fi ipigilootiirra faca’anii argamu. Haa ta’u malee, baayyeen isaanii arrabarra jiru. Kuskuseewwan dhadhammii morfooloojiin garaagarummaa kan hin qabne (hundi boca birillee qabu) yommuu ta’an fiziyoloojiin garaagarummaa qabu (Fakk. 11). Kunis ta’e kuskuuseen dhadhammii hundi dhadhammii jalqaba hundaf (arfaniif) hanga tokko miirawoo dha; caalmaatti garuu:
Kuskuseewwan fiixee arrabaa- dhadhammii mi’aawwaaf
Kuskuseewwan qarqara walakkaa arrabaa – dhadhammii dhangagaa’aaf
Kuskuseewwan fiixee fi qarqara fiixee arrabaa – dhadhammii ashaboof
Kuskuseewwan duuba arraba – dhadhammii hadha’aa
Fakki 2. 11 Facaatii kuskuseewwan arrabaa
Hub:- walakkaa fi jalli arraba kuskuseewwan dhadhaa hinqaban.
2.5.5.1 Adeemsa dhamdhammii
Kemikaalali bulbulamuu danda’u afan keessatti kuskuseewwaniin wal xuquun ergaa neervii maddisiisa. Ergaan neervii uumame kara aneervota arrabaa sammuu bira dhaquu dhaan hiikkaa argata.
Sirbidoonni rifachiisoo kamikaalaa (foolii) funyaanii sirbidoota olfaaktorii jehdamu. Sirbidoonni kun holqa funyaanii gara olii keessatti argamu. Sibidonni dhamdhamni epitaaliyaalii yommuu ta’an sirbidoonni foolii garuu niwuronoota. Seelonni olfaaktorii (faallaa niwuroonota qaamaa hundan) kallattiin ala quunnamu. Dabalees, faallaa niwuronoota qaamaa baayyeetiin, sirbidonni olfaaktorii yoo manca’an bakka bu’u danda’u.
2.5.6.1 Adeeemsa dhandhammii
Adeemsi dhamdhammi haala quubsa hin jiru. Haata’u malee, akka yaada hiddama jiru tokkootti garuu bocii fi hammi moliikilii seelota olfaaktorii xuquu foolii adda baasuu keessatti ga’e akka qabanii dha.
2.6 Sirna Wal Hormaataa
2.6.1 Sirna wal hormaataa dhiiraa
Sirni wal hormaata dhiiraa kutaalee armaan gadii qabaatee jira (Fakki 2.12).
Dheerina sm 4 fi diyaameetirii sm 2.5 ta’a. Koroojoo cidhaaniin qaamaa alatti luka laman gidduu gadii rarra’ee jira. Ga’een isaa inni iijoon seelii gaameetii dhiiraa (ispeermii) fi hormonoota saala dhiiraa oomishuu dha.
Cidhaanni ujummoolee hedduu qabatee jira: seminifiresii, vaas effeereenti, ippiidedimii fi vaas deferensii. Ispeermiin ujummoolee seminifiresii jehdaman keessatti adeemsa ispermaatoojinesisii jedhamuun oomishama. Hormonoonni saala immoo seelota ujummoolee seminifiresii gidduutti argamaniin oomishamu. Seelonni kun interestiishaalii jedhamu. Ispeermiin oomishamee ujummoole vaas effeereenti jedhamaniin geejjibamuun holqa ippiidedimii jedhaman keessatti kuufamuun bilchaatu . Guyyoota 40-60 gidduutti qaamaa ba’u qabu kanaa achi manca’uu dhaan dhaabaa ippidedimiitti xuuxamu. .
Yuriiteraa fi tuffee/qunxusee
Yommuu walqunnamtii saalaa ispeermiin ipiidedimii keessaa ba’uun ujummoo vas deferensi jedhamuun gara yuriteraa tuffeetti xuruura. Yuriteraan yeroo garaagaraatti ispeermii vaas deferensiirraa yommuu fudhatu, fincaan immoo afuuffee fincaanii irraa fudhata.
Xannachoota dhangala’oo maddisiisan (pirosteetii, vesikilii fi kawoperii)
Naannoo hundee yuriteraa xannachoota dhangala’oo maddisiisan sadiitu jiru: pirosteetii, vesikilii fi kawoperii . Ispeermiin naannoo hundee yuriteraatti dhangala’oo kana makatee darba. Haaluma kanaan kan gara alaatti ba’u (qaama dhalaatti darbu) makaa ispermii fi dhangala’a kanaati. Makaan kun semenii ykn xaranxara jedhama. semenii keessa %90 dhangala’a kana yommuu ta’u seeliin ispeermii %10 qofa.
Fakki 2.12 Sirna walhormaata namaa
Ispermin kutaalee gurguddoo afur qaba (Fakk. 2.13):
Mataa- Inzayima hiiyalaronidaasee (hyaluronidase) jedhamu qaba. Inzaayimiin kun aguuggii hanqaaquu laaffisuun ispeermiin salphaatti hanqaaquu akkaa seenuf haaa mijeessa.
Morme- senterooyilii cimdii qabatee jira.
Qoma- maayitokondoriyaa qabatee jira.
Eegee – sochiif
Fakki 2.13 Caasaa ispeermii namaa
2.6.2 Sirna walhormaata dhalaa
sirna walhormaata dhalaa caasaalee kan akka ovaarii, ujummoo ovarii, gadameessa, seerviksii/morma gadameessaa fi buqushaa qabatee jira (Fakk. 2. 14).
Sirna wal-hormaataa dhalaa keessatti, ga’een oovaarii seelii gaameetii dhalaa (hanqaaquu ) fi hormonii saalaa dhalaa qopheessuu dha. Ademsi uumamuu fi dagaaguu hanqaauu oojinesisii jedhama .
Ujummoo ovaarii –
Ujummoon oovaarii ujummoo qalloo oovaariirra gara gadameessaatti diriiree jiruu dha. Ga’een isaas walfudhannaa hanqaaquu fi ispeermiif haala mijataa uumuu dha.
Caasaa boca rog-sadee qabu ta’e bakka da’imni hin dhalatin keessatti guddatuu dha.
Daangaa buqushaa fi gadameessa gidduu jiruu dcha.
Ujummoo da’umsaa fi walquunnamtii saalaati. Dhiira keessatti yuriteraan seemenii fi fincaaniif yommu gargaaru, dubaartii keeessattti ujummoon buqushaa (walhormaataa) fi yuriteraa garaagara. Buqushaan caasaalee garagaraa qaba. Isaanis
Qinxirii (kilitorii): Caasaa dhaabbachuu danda’uun qunxusee fakkaatuu dha. Miirawaa waanta’eef, dalagaan isaa, fedhii dubartii kakaasuudhaaf/finiinsuuf ta’a.
Durbummaa /haayimeenii (hymen): Membereenii afaan buqushaa gara gadii aguugee jiruudha. Umurii saafelaatti uraa xixiqqoo uumachuu eegala. Irra caalmaan walquunnamtii saalaa jalqabaan cirama.
Vistibulee:Holqa buqushaati. Vistibuleen gogaa cimdii laman marfamee jira. Cimdiin inni keessaa laabiyaa maayinoraa /hidhii xiqaa ; inni alaa immoo laabiyaa maajoraa/hidhii guddaa jedhama.
Fakkii 2. 14 Sirna walhormaata dhalaa
2.6.3 Marsaa Laguu
Dubartii waggaa 10 fi isaa ol taate keessatti dhiigi ji’a ji’an karaa buqushaa dhangala’a. Dhiiguun sirna wal hormaataa kun laguu yommuu jedhamu, ji’a ji’an naanna’uun isaa immoo marsaa laguu jedhama.
Leenjifamtootaa: maddi dhiiga kanaa maali?
Hanqaaquun oovaarii keessatti qophoofte tokko ji’a ji’aan gara ujummoo oovaariitti deemti. Hanqaaquun sanyii kormaa ykn ispeermii yoo argachuu baatte sa’aa 72 giddutti ni duuti. Hafuun misoomuu hanqaaquu diigamuu dhaabaa gadameessaa qaqqabsiisa . Guyyoota muraasa booda hanqaaquun duuteef dhaabaan gadameessaa diigame bifa dhiigaatiin gara alaatti ba’u.
2.6.4 Fayyaa wal hormaataa
Fayyaa walhormaataa jechuun sirna walhormaataa ilaalchisee kallattii fi sadarkaa hundaan qaamaan, sammuu fi hawwaasummaan nagaa ta’uu dha. Fayyaa walhormaataa gaarii qabaachuun jireenya gaa’eelaa gammachiisaa fi nagaa qabaachuu dha. Fayyaa walhormaataa uumuu keessatti hal dureen ijoon kanneen armaan gadii irratti odeeffannoo gahaa argachuu dha:
karoora maatii irratti
Sirna walhormaataa keessatti jijjiirama irraa jalaan dhufu irratti
Dhukkuboota wal quunnamtii saalaan dhufan irratti
Qophii yeroo marsaa laguu
Michuu saalaa dhugaa filachuu irratti
Yeroo sirrii fi bakka sirriiti adeemsa wahormaataa keessa galuu irratti
Daa’ima nagaa fi fayyaa godhachuu fi guddifachuu irratti
Soorata addaa yeroo ulfaa barbaarchisan filachuu irratti
2.6.5 Maloota Ittisaa ulfa
Ulfa ittisuu jechuun akka seeliin saalaa dhalaa (hanqaaquu) seelii saalaa dhiiraan (ispeermii) hin misoomne gochuu jechuu dha. Tooftaaleen kun bakka gurguddoo lamatti qoodamu: tooftaalee uumamaa fi nam tolchee. Tooftaaleen ulfa ittisuu hedduu jiran keessaa baayyeen kan dhalaati. Tooftaalee jiran kana keessa filachuun murtoo abbaa itti fayyadamuu yoo ta’es, haalli mijachuu , amansiisummaa fi miidhaa cinaa toofftichaa kan xiyyeeffannoo barbaaduu dha.Tooftaaleen ulfa ittisuu warri ijoon akka armaan gadiitti dhihaatanii jiru (Gabatee 2.7 ).
Gabatee 2. 7 Maloota ulfa ittisuu warra ijoo
Mala Tooftaa raawwii Milka a’ina( %) Hanqina
Saal quunnamtii Dhiisuu Walquunnamtiin hin raawwatu 100 nama of amansiisuu hin dandeenyeef miidhaa qaba
Keessaa baasuu Yommuu ispeermiin dar buuf dhufu tuffee baasuun ispeermii buqushaa alatti dhangalaasuu Dhiira si’ataa, tasgabba’aa qofa gargaara; ispeermiin dursee cobuu danda’a
Lakkoofsa guyyaa (Raythm method) Guyyoota hanqaaquun ujummoo gadameessaa keessa jirutti walquunnamtii saalaa dhiisuu. 70 – 85 Dubartoota marsaa laguu dhaabbataa qabanii fi ragaa qabachuu danda’an qofa fayyada.
Kondomii dhiiraa Ispeermiin kondomii keessatti dhangala’a 97 Carraa tarsa’uu qaba
Qadaaddiwwan (diaphragm or cap) Laastikichi kaawwatamu Kemiikaala Ispeermii ajjeessu dibama 85-97 Ogeessa ka’u barbaada ykn fayyadamtuuf leejii kennuu; garaa ciniinna fiduu danda’a.
Tubaaligeeshinin Ujummoo gadameessaa kutanii hodhuu 100 Booda deebisuun hin danda’amu
Vaskotomii Vaas deferensii kutanii hodhuu 100 Booda deebisuun hin danda’amu
Hormonota /piilii Ovuuleeshiniin hambisuudhaan 99 Ulfatinni dabaluu, furdachuu/bishan kuusuu qaamaa
Limmoodhaan kan fudhatamu -Ovuuleeshinii hambisa -Limmoodhaan piroojestiroomii waraannachuu 99% Iddootti deebi’uuf carraa xiqqaa qaba.
IUD (Intra Uterina Device) -Meeshaa gadameessaa keessa ruuqamu Gadameessa keessa Doktoraan kan ka’amu ta’e hanqaaquun misoome akka bakka hin qabanne dhorka. 96 – 99 Darbee darbee dhiiguu fida.
2.6.6 Dhaqna Qabaa Dubaraa
Aadaa hawwaasaa keessa barmaatileen miidhaa qaban hedduutu jiru. Barmaatilee kana keessaa inni hammaataan dhaqna qabaa dubaraati. Akkka hiikkaa dhaabbata fayyaa addunyaatti (WHO) dhaqna qabaa dubaraa jechuun waldhaassa tokkoof osoo hin ta’in callisanii kutaalee buqushaa warra akka qinxirii fi laabiyaa guutummaatti ykn walakkaan kutanii gatuu dha. Midhaa barmaatileen kun qabu kan battalaa fi yeroo dheeraa jedhamuun bakka lamatti qoodamu.
Kan yeroo gabaabaa/battalaa;
Dhukkubbii, dhiiguu, teetaanosii, fincaan qabachuu, madaa’uu naannoo buqushaa,kkf. Kan yeroo dheeraa immoo;
Afuuffee fncaanii fi ujummoo fincaanii irra deddeebiin dhibamu(infection) qaqqabuu;
Dhiiti(cyst) naannoo buqushaatti uumamuu;
Daa’ima dhaluu irratti balaaf saaxilamuu fi du’aatii daa’imaa fi
Isa duuchame/ dhiphifame banuuf wallaansa baqaqsanii hodhuu saaxilamuu Barmaatileen miidhaa qaban biroon immoo warra akka:
Misiroo qeensa buqqisuu,
Guyyoota laguutti dubartoota adda baasuu,
Qaama murmuruu fi gubuu,
Ilkaan daa’imaa Buqqisuu fi
Huuba qoonqoo kuchisiisuu fa’i.
2.6.7 ‘HIV” fi “AIDS”
AIDSn dhukkuba ittisa qaamaa manccaasuun miidhmticha dhukkuba biroof akka saaxilamu taasisuu dha. Qabsiistuun dhukkuba kanaa vaayiresii HIV jedhamuu dha.
A. ‘HIV”n akkamiin dhukkuba nama qabsiisa?
HIVn sirbidota CD4 dirra seelota dhiiga adii seelotaa T limfoosaayitii irratti edda qabatee booda, tartiiba armaan gadii keessa darbuun qaama keessatti baayyachuun AIDS fida.
Vaayiresichi RNA fi inzaayima kan mataaisaa riverstiraniskiriptesii jedhamu seelii itti qabatetti galcha.
Riverstiraniskiriptesiin niwukilotaayidoota seelii fayyadamuun RNA gara DNAtti jijjiira.
DNAn vaayiresii DNA seeliin walfudhata.
DNAn vaayiresii gara RNA vaayiresiitti jijjiramuun pirootinii vaayiresii fi riverstiraniskiriptesii oomishuu eegala..
RNAn, riverstiraniskiriptesii fi pirootiniin oomishame kun seelii mataa isaan HIV haaraatti ijaaramu.
HIVn haaraan kun yeroo garaagaraatti seeliirraa cituun seelii biroo wareeruun hubaatii seelota T- limfoosaayitii fida.
yeroo gara yerootti ho’i qaamaa dabalaa deemuu
Dafqi halkan namatti heddummachuu
Of dadhabuu, umna dhabuu;
Ulfaatinni qaamaa hariitiin hir’achuu
Quunnamtii saalaa tokkoo fi tokkoon hin murtoofneen,
Dhiiga HIV qabuun kallattiin faalamuu ykn meeshaalee adda addaa dhiiga dabarsuuf, baqaqsanii hodhuuf, ilkaan buqqisuuf, qoricha dhiiga keessatti dabarsuuf gargaaraman kan HIVn faalame yoo ta’e,
Haadha irraa gara daa’imaatti: gadameessa keessatti karaa pilaaseentaa, yeroo da’umsaa fi harma hoosisuun
D. ‘HIV/AIDS’ cabsuu/dhaabuukeessatti ogummaa jireenyaa baballachuu qabu
HIV/AIDS ittisuu keessatti ga’e guddaa kan qabu jijjiirama amalaa hawwaasichaa fi namni dhuunfaan horachuu qabuu dha. Kana jechuun:
Jireenya ofii keessatti amala gochaalee saalaan walqabatan irratti jijjiiramuu;
tamsa’ina HIV/AIDS dhaabuu fi cabsuu keessatti maal na gashee dhiisuu;
Namoota vaayiresichaan qabaman qooduu dhiisuu ;
Yoo danda’ame tokkoo fi tokkotti murtaa’uu ykn koondomiitti dhimma ba’uu;
Balaan HIV/AIDSn dhufu walxaxaa ta’uu isaa hu bachuu, hubachiisuu,hojiin agarsiisuu.
II. Dhqna qabaa dhiiraa jajjabeessuu
o Akka beektonni bayyeen jedhanitti dhaqna qabaan booda gogaan biqilu cimaa fi jabaataa (isa dhalootaarra) ta’uu fi qulqullinni naannoo gubbee qunxusee fooyya’uun daddarba HIV % 60 n akka gadi buusuu dha.
2.7 Sirna Indokiraayinii
To’annoo fi qindoominni nafaa sirna indookiraayinii fi sirna neerviitiitiin rawwata. Sirni Indokiraayinii tuuta xannachoota Indookiraayinii jedhaman irraa kan ijaarmee dha. Akka waliigalaatti xannachoota gosa 2 tu qaama namaa keessatti argamu. Isaanis: xannacha indoo kiraayinii fi xannacha eksookiraayinii dha. xannachoonni eksookiraayinii ujummoo qabeeyyii fi dhangala’oo garaagaraa oomishu: Fkn.
Inzaayima – Xannachoota bulleessuu soorata, caasaalee qaamaa biro
Zayita gogaa Xannachoota zayitaa gogaa (sebaceous gland)
Aannan Xannachoota armaa
Dafqa Xannachoota dafqaa
Xannachoonni indokiraayinii ujummoo maleeyyii fi dhangala’aa hormonii jedhamu kan oomishanii dha. Xannachoonni muraasi amala xannachoota lamaanuu qabu. Fkn : rajiijii, oovaarii, cidhaan, haayipotalamasii,
Indokiraayinoonni haala kamiin hormonii oomishan geejjibu?Inzaayimoonni bakka oomishamanitti ykn fagaatanii deemuun dalagu. Hormonoonni hoo eessatti dalagu?
2.7.1. Uumamaa fi dalagaa hormonii
Hormoniin dhangala’aa caasaa murtaa’aa ta’een maddee dhiibbaa murta’aa caasaa ykn dalagaa biro irratti kan qabu dha. Garee kemikaalaan, hormonoonni bakka 3tti qoodamu
Isterooyidii – fkn: testoostironii, estiroojinii,kortisolii, aldostironii,kortiikostironii
Peptaayidii fi pirootinii – fkn:oksitosinii,hormoonii guddinaa,kalsitoninii,insuliinii,gilukagonii,parathormoonii
Aminsii– fkn:aderenaalinii,nor aderenaalinii,taayiroksinii,pirolaaktinii,
Dalagaa isaanii keessatti hormonoonni dhiibbaa kan geessisan kallatti garaagaraan. Kunis:
Meembireeni seelii irratti dhiibbaa geessisuun wantoonni seelii akka seenaan ykn ba’an taasisuu
Inzaayima meembireenii keessa jiru irratti dhibbaa geessisuun walnyaatinsa saffisiisuu
Jiinii irratti dhibbaa geessissuun uumama amala murta’aa ta’e tokkoo qaqqabsiisuu
2.7.2 Amaloota Hormonii
Hormonooni akka waliigalaatti amaloota armaan gadii calaqisiisu;
fageenya irratti dalagu (bakka oomishamanitti hin dalagan)
dalagaa dhaan murtaa’oo dha ( hormoniin tokko molikiyulii tokko qofa irratti
cunqoo xiqqon bu’aa guddaa buusu.
2.7.3 Xannachoota Indokiraayini Gurguddoo Nafaa fi Dalagaa Isaanii
Xannachoonni gurguddoo nafa namaa 8 ykn 9 yommuu ta’an gosa hormonii madisiisanii fi dalagaa hormonii isaanii faana haala gabatee 2.8. keessatti ibsameen dhihaatanii jiru.
Gabatee 2.8 cuuunfaa odeeffannoo xannachoota indookiraayinii namaa
Xannacha Hormoonii Maddisiisan Dalagaa Hormonichaa
Pitutaarii Hundee sammuu jalatti argamti Hamma ija dungulee geessi Hormoonoota hedduu Piroolaaktiinii Oomisha aannan kakaasuu fi gad lakkisiisuu
Hoormoonii guddinaa Guddina qaamaa fi pirootinii oomishuuf gargaara
maddisiisa Gooftaa xannachootaa jedhamun beekamti . Hormoonii dammaqsisuu taayrooyidii Xannachi taayrooyidii akka hoormoonii taayirooksiinii maddisiisu dammaqsa
Taayirooyidii Morma keessatti argamtti Hormonoota lama oomisha. Taayirooksiinii Dagaagina, guddina sammuu fi meetaboliizimii nafaa
kalsitoninii Kaalsiyemii dhiigaa xiqqeessuu
Paaraataayirooyidii Morma gara keessatti dudduubaa taayirooyidiitti argamu Baay’inaan 4 Paaraathormooni i hamma Ca++ fi PO43- dhiigaa to’ata
Adireenaalii Adireenaalii korteeksii Koorteeksii irrattiargama kortisolii Meetabolizimii karboohaayidireetii, pirootinii, coomaa; bilchaachuu seelota dhiigaa adii.
aldostirolii N a+ xuuxuu, madaallii bishaanii fi albuudotaa eeguu
Adireenaalii meeduullaa Meduullaa irrattiargama Adireenaaliinii Dhahannaa onnee dabala, maashaa lafee yaasa
Ayisleetii rajiijii Rajiijii keessatti faca’anii argamu Giluukaagoonii Giluukoosii bifa gilaaykoojiniin kuufame diiguun dhiigatti dabala
Insuuliinii Giluukoosii dhiiga keessatti baay’ate gara gilaayikoojiniitti jijjiira
Xannachoota Saalaa (Cidhaanii fi Ovaarii) Cidhaan Testeestiroonii Amaloota saal lameessaa dhiiraa to’ata
ovaarii Ostiroojinii Aamaloota saal lamessoo dhalaa to’ata
Piroojestiroonii Akka oovuleeshiniin(Gad lakkifamuu hanqaaquu oovarii gara ujummoo oovaarii) hin uumamamne taasisa
2.7.4 Mudoo xannachoota idokiraayinii
Daangaa ol baayyachuun ykn xiqqachuun hormonotaa dhibee ykn mudoo xannachoota Indokirayiniin kan dhufuu dha. Haall i kun nafi dhibee garaagaraaf akka saaxilamu taasisa. Dhibee kana keessaa warri ijoon:
Quufa salphaa (quufa mit-summa’aa)- dhiita’uu tishuu xannachaa taayirooyidiiti. Haalli kun
Sababi– hanqina ayoodinii Mallatoo – mormmii dhiita’uu
Ittisa- wantoota ayodinii qaban nyaachuu (ashaboo ayoodinii, qurxummii nyaachuu, ) Wallaansa- baqaqsaanii baasuu, ashaboo ayoodiniin qophaa’e nyaachuu
Quufa summaa’aa – baayyachuu hoormoonii tayiroksiniiti. Sababa – daangaa olitti si’aa’uu xannacha taayirooyidii
Mallattoo – fedhiin nyaataa dabaluu, ulfinni xinnaachaa deemu,
Meksideema- xinnaachuu tayirooyidiin (nama ga’eessa keessatti (da’imaa keessatti kiretinizimii jedhama).
Sababa – miti si’ataa ta’u taayirooyidii
Mallattoo- hariitiin meetabolizimii gad-bu’u, hiriba dhabuu, ulfaatinni dabaluu, garaan goguu, goguu gogaa
Diyabetii melitusii (dhukkuba sukkaaraa) – jeeqamuu meelaabolozimii sukkaaraa, coomaa fi pirotinii
Sababa – dhibuu insuliinii ykn seelii xiyyeeffannoo dhabuu insuliinii
Mallattoo – polii yuuriya (fencaan baaayyee), polii daayipsiya (dheebuu cimaa), polii faajiyaa (beela cimaa), heeyiper gilaayiseemiyaa gilaayikosyuuriya, ketoyuuriyaa.
Diyabet insipidesii (finceesaa)- bishaanni baayyeen fincaaniin ba’u Sababa- xinnaachuu hormonii- ADH.
Mallattoo- dafanii dafanii fincaa’uu, dheebuu (leetira 4-10 guyyaatti)
2.8. Sirna Usaansaa
Usaansi adeemsa xurii seelota keessatti meetaabolizimiin oomishamu adda baasuun dhabamsiisuu dha. Xuriin kun itti fufiinsaan dhabamsiifamuun keessi qaamaa sadhataan tasgaba’aa fi sirrii ta’a. Haalli kun hoomihoostasasii(homeostasis) jedhama. Nama keessatti usaansi sirna qaamaa afuriin raawwata:
sirrna hargansuu (somba)- dhabamsiisuu CO2, gaasota biro fi bishaanii
Sirna gogaa – dhabamsiisuu bishaanii , ashaboo, yuuriyaa, laktik asiidii
Sirna bulleesuu soorataa (Tiruu)- dhabamsiisuu bishaanii, ashaboo, CO2, hadhooftuu (dhabamsiifamuun bobbaa usaansa miti )
Sirna yuriinerii- dhabamsiisuu ashaboo, summii,yuuriyaa, qorichaa,hormonii,
2.8.1 Sirna yuriinerii
Sirni kun qaamolee ja’a irraa kan ijaaramee dha: kalee lama, yuriiteeraa lama, afuuffee fincaanii fi yuriteraa dha (Fakk.2.15) .
Fakkii 2. 15 Caaasaa sirna yuriinerii
A. Caasaa kalee
Tokkoon kalee kutaalee gurguddoo 3 qabdi (Fakk. 2.16).
Korteeksii – baqqaana alaa
Meduullaa – baqqaanaa gidduu
Pelvisii – baqqaana marrumman medullaa kan yuriteriitti banamu
Fakkii 2.16 Caasaa kalee
Kaleen dalagaalee armaan gadii raawwata:
Pilaasimaa calaluun fincaan uumuu
Osmoriguleeshenii (adeemsa to’annaa bishaanii fi ayonoota seelii).
Nefiroonin bu’uura caasaa fi dalagaa kaleeti. Tokkon kalee nefiroonota miliyona tokkoo ol qabdi. Tokkoon nefironii kutaa ijoo 2 qabdi (Fakk. 2.17);
Reenalii kapsulii (kapsulii Bowmanii fi gilomeerulasii)
Ujumoolee reenaalii [ ujummoo maraa olii (UMO), loopii Heenel (LH), ujummoo maraa gadii ( UMG) fi ujummoo sassaabduu(US).
Nefirooniin xurii pilaazimaa dhiigarra adda baasuun fincaan omishuu. Tokkon tokkoon nefiroonii
korteeksii keessaa (kapsulii Bowmaniin) eegaluun fincaan peelvisii keessatti xuruursu. Kana
jechuun: KOM→UMO→LH→UMG →US). Kapsuliin Bowmanii kaapilerota addaa Gilomerulasii
jedhaman qabatee jira.
Fakki 2.17 Caasaa neferoonii
2.8.4 Adeemsa oomisha fincaanii
Oomishi fincaanii kan eegalu yommuu dhiigi gilomerulasii seenee calallii gilomerularii uumuudha.Tooftaan fincaan oomiishuu akka walii galaatti adeemsa sadarkaa sadii qabuun raawwwata. Isaanis: calaluu gilomarularii (CG); Filachuun deebisanii xuuxuu (FDX) fi maddisiissuu ujummoo (MO),
Calaluu Gilomerulaarrii- sadarkaa kanatti dhiigi gilomerulari seenee dhiibbaa olaanaatti saaxilama. Yeroo kana wantoonni xixinnoon hammaan nm3 gadi ta’an karaa dhaabaa giloomarulasii ba’un kaapsulii Bowmaanii keessatti calallii gilomarularii uumu. Qabiyyeen calallii kanaas: Gilukosii, amiino asiidii, viitaaminii, hormonii, yuuriyaa, albuudota ashaboo, keraatinii fi bishaani. Guyyaatti namni tokko guyyaatt calallii
giloomarularii naannoo leetira 180 tu oomishama. Kana keessaaa sadarkaa FDX fi MU keessa darbuun, fincaan leetira 1 hanga 2tu guyyaatti oomishamuun dhabamsiifama.
Filachuun Deebisuun Xuuxuu- calallii ujummoolee reenaali sadan (UMO, LH fi UMG) keessa gadi lola’u/yaa’u irratti adeemsa FDX tu raawwata. Kana jechuun wantoonni qaamaaf barbaachsioo ta’an deebi’un gara kaapilaarota ujummoo reenaalii marsanii jiranitti geejjiba si’ataa fi osmoosisii dhaan xuuxamu. Adeemsa kanaan calallii gilomarulaarii keessaa %80 kan ta’utu deebi’ee xuuxama.
Maddisiisuu Ujummoolee- adeemsa kanaan kemikaalonni (yurik asiidii, qorichoota, hormonoota, …) qaamaa keessatti faayidaa hin qabne kaapilaarii dhiigaa ujummoolee reenaalii marsanii jiran keessaa gara calallii gilomarulariitti dabalamu.
2.8.5 To’annaa bishaanii fi ayonii fincaan keessatti
Cunqinni fincaanii kan hundaa’u haala bishan qaama keessa jiruu irratti. Kana jechuun, yommuu bishaanni qaama keessatti baayyatu(hydrated) fincaan bishaan baayyee qabutu ooomishama; yommuu bishaanni qaama keessaatti xiqqaatu (dehydrated) immoo fincaan bishaan xiqqoo qabutu oomishama. Haala qaamni hanqina bishaanii qabu keessatti, ujummoon sassaabduu bishaan fincaan keessaa waan deebisee xuuxuuf fincaan cunqina (haayipertonika ta’e) qabutu oomishama. Kanis kan ta’u, dhiibbaa hormonii farra dheebuu (ADH- anti diuretic hormone) jedhamuun ta’a.
Qaama keessatti xiqqaachuun bishaanii oomisha ADH dabala. ADHniin meembireenii ujummoo reenaalii caalmaatti banamee bishaan akka ofitti xuuxu taasisa. Karaa biraa immoo yommu qaamni bishaan gaha qaabu oomishamuun ADH waan hin jirreef fincaan callabaa’aatu (haayipotonikatu) oomishama.
2.8.6 Qabiyyee fi qabee fincaanii
Haala sirrii fi fayyummaa qabu keessatti, fincaan keessaa %95 bishaan yommu ta’uu %5 kemikaalota (yuuriyaa, NaCl, KCl, keratinii, yuurikasiidii, fosfeetii, saalfeetii,) qabatee jira. Namni ga’eesi giddu galeessan guyyaatti fincaan leetira 1-2 oomishuun dhabamsiisa.
2.8.7. Kuusuu fi dhabamsiisuu fincaanii
Calalliin gilomarularii ujummoo sassaabduu keessatti fincaanitti eddaa jijjirame booda gara peelvisii reenaalitti darba. Peelvisii keessa gara ujummoo yuriteriitti darbuun dhaqee afuuffee fincaanii keessatti kuufama. Afuuffeen fincaanii yommuu walakkaa oliin (ml 200 ol) guutu,
kottonfachuun fincaan gara yuriteraatti dabarsuuf fedhii godhata. Yeroo kana fincaanni karaa yuriteraa qaamaa ba’a. Adeemsi kun fincaa’uu ykn mitktariishinii (micturition) jedhama. Adeemsi miktariishenii uumamaan fedhiin ala yoo ta’ellee, bilchina umuriin hanga tokko sammuun tursuu
/to’achuu ni danda’a.
2.9 Sirna Iskileetonii Namaa
Lubbu qabeeyyin hundi dalagaalee isaanii sirriitti hojjechuuf utubamuu fi socho’uu isaan barbaachisa. Sirni iskileetonii abbummaadhaan kan dalagaalee kana rbaayyee barbaachisaa dha. Akka waliigalaatti sirni iskileetonii 3 tu jiru:
Haayidiroo iskileetonii – biqilootaa fi raamolee keessatti argama;
Eksoo-iskileetonii– artiroopodaa keessatti argama
Indoo -iskileetonii– qurxummiilee , allattota, hoosistootaa fi rapitaayiloota keessatti argama.
Iskileetoniin namaa caasota lama irraa kan ijaarameedha: lafee fi kaartiileejii. Lafeen caasa jabaataa sirna kanaa yommuu ta’u, ashaboolee kaalsiiyeemii irraa kan ijaaramee dha. Lafeen seelota jiraato kan qabuu fi ofii isaatis kan guddatuu dha. Nama ga’eessa keessatti lafee 206 ta’antu jiru. Kaartiileejiin jabaata yoo ta’es caasa dadacha’uu danda’uu dha. Hoosistoota keessatti umurii gara gadiitti kaartiileejiin haa baayyatu iyyu malee akkuma umuriin dabalaa deemuun lafee dhaan bakka bu’aa deema.
2.9.1 Caasaa fi Dalagaa Sirna Iskileetonii Namaa
Sirni kun kutaalee lama qaba – Iskeleetoni aksiyaalii (axial skeleton ) fi Iskileetoni apendiikulaari (appendicular skeleton ) jedhamu.
A. Iskileetoniin aksiyaalii – kutaan kun lafee gosoota 4 qabatee kan jiru yommuu ta’u baayinni lafee waliigalaa isaa 80 ta’a. Isaanis;
Qabee mataa (skull bone)- lafee 29
lafeen qabee mataa qofti 22 yommuu ta’an lafeen gurraa (6) fi lafee liqimsituu (hyoid bone)( 1) dabalatee 29 ta’u. Lafeewwan kun sarara saacherii (suture) jedhamuun walitti hidhamanii jiru.
Lafeen mataa bakka duwwaa kan akka balleensa sammu , mangaagaa, gidduu fi keessa gurra a,holqa funyaanii qabatee jira.
lafeewwan kana gidduu qaawwi xixinnoon jiru. Isaanis fooraamiinaa (foramina) jedhamu. Fooraamiinaan daandi deemsa neervotaa fi dhiigaaf gargaaruu dha.
Dugugguruu ykn bo’oo lafee dugdaa ( vertebral or spinal column) – lafee 33/26
lafeen dugda umurii dargaggumaan dura 33 yommuu ta’u dargagumaan booda 26 ta’a.
Walakkaan dugugguruu qaawwa niiwuraal kaanal jedhamu kan qabu yommuu ta’u innis narviin ispaainaalii (spinal nerves) kan keessa diriiree jiruu dha.
lafee dugdaa wal cinaa jiru giddu qaawwa karaa narviin seenee ba’utu jira.
lafeen dugdaa zoonii 5 tti qoodamu. Isaanis akka armaan gadiitti gabatee 2.9 keessatti ibsamanii jiru:
Gabatee 2.9 kutaalee lafee dugugguruu
T.L zoonii / Kutaa Dalagaalee Baayina Lafee (33/26)
1 Mormaa (cervical) Socho’uuf, dabuu mormaaf 7
2 Laphee(thoracic) Lafee cinaachaa utubuuf 12
3 Huffa(umbar) Naanna’uuf, dabuuf 5
4 Mo’oo (sacara / hip) Ulfaatinaa qaamaa baachuf dargaggumaan dura 5; dargaggumaan booda 1(5tu walitti baquun 1 ta’a)
5 Eegee/faacho(caudal) Faayidaa hinqabu (namaaf) Dargaggumaan dura 4; dargaggumaan booda 1 (4tu walitti baquun 1 ta’a)
Lafee cinaachaa- lafee 24
Lafee molgoo cimdii 12 yommuu ta’an lafee armaa fi dugugguru wajjin wal qabachuun guuboo cinaachaa (rib cage) uumu. Caasaan kun onnee fi somba ittisuuf argaara.
lafeen kun hundi karaa duuba lafee dugdaa kutaa lapheetti yommuu qabatan, cimdiin jalqaba torban (7) immoo lafee armaatti qabatanii jiru. Cimdiin itti aanan 3 immoo kaartiileejii dhaan cimdii torbaffaatti yommuu qabatan, cimdiin lamaan hafan qileensarra jiru.
lafee armaa (sternum )-lafee 1
lafeen cinaachaa muraasa ta’an kan utubuu fi maashaalee abdoomenii muraasaaf bakka itti qabannaa ta’ee lafee tajaajiluu dha.
Apendiikulaarii– kutaan kun lafee waliigalaa 126 qabatee jira. Lafeewwan harkaa fi miilla iddoo tokkotii liimbii yommuu jedhaman; Lafeen harkaa- liimbii fuuldura, lafeen miilla-liimbii boodaa jedhamu . Iskileetoniin apendiikulaarii kutaa 3 tti qoodamu: Ceequu , Mo’oo fi Liimbii (Gabatee 2.10).
Gabatee 2.10 kutaalee lafee apendiikulaarii
Gosa lafee caasa fi amala
1 Ceequu ( pectoral girdle ) – lafee 4 -fuulduraan lafee armaatin, boodaan lafee cinaachaan maashaa cimaa dhaan wal qabatee jira; lafee harkaa ofitti hidhee jira.
2 Mo’oo (pelvic girdle)- lafee 2 -afuuffee fincaanii fi qaawwa teessuu marsee jira; lafee miillaa ofitti hidhee jira; kan dhalaa kan dhiiraarra ballata.
3 Liimbii- lafee 120 hirree/harka – lafee 60 -Ciqilee ol kan jiru hirree olii; Ciqilee gadi kan jiru immoo– hirree gadii jedhama. -lafeen hirree oli -1 qofa; huumeerusii jedhama lafeen hirree gadii- 2; raadiyeesii fi ulnaa jedhamu -lafeen hirree gadii fi barruu gidduu-8 ; kaarpaalii jedhamu -lafeen barruu –5 ; meetakarpelsii jedhamu. lafee qubaa- 14 ; falaanjeesii jedhamu, quba afran keessa 3; quba guddaa(thumb) keesssa 2
miilla/luka- lafee 60 -lafeen jilbaa olii- 1 fuumerii (fumer) jedhama. Karaa olii boolla mo’ootti, karaa gadii dhooqa jilbaatti qabatee jira. lafeen qadaaddi dhooqa jilbaa- 1; paateellaa jedhama. -Lafeen jilbaa gadii 2- tiibiyaa fi fiibullaa jedhamu. -lafeen gulubii/koronyoo-7; tarsaalsii jedhamu. lafeen faana-5; meetaatarsaalsii jedhamu. -lafeen quba miilla 14 ;- falaanjeesii jedhamu, quba afran keessa 3; quba guddaa(thumb) keesssa 2
2.9.2 Mitika/Buusaa (joints)
Mitiki/Buusaan bakka lafeewwan lama ykn isaa ol wal quunnaman yommu ta’u lafeen kallatti adda addatti akka socho’an gargaara. Sadarkaa bilisaan socho’uu isaanii irratti hunda’uu dhaan buusaan bakka gurguddoo 3 tti qoodamu (Gabatee 2.11):
Gabatee 2.11 Gosoota mitikaa
Buusaawwan Ibsa Fkn
1 Sochi kan hin taasisne (fixed joints) tasa hin socho’an qabee mataa
2 Xiqqo kan socho’an hanga xiqqo socho’u lafee dugdaa
3 Bilisaan kan socho’an (gosa baayye dha) kallatti 1,2 ykn 3n socho’u
a. kubbaa fi holqa (ball&socket ) kallatti hundaan (3n) socho’u Harkaa fi miilla
b. akka cufaa balbalatti kan soch’an (hinge) kallati tokkon-fuldraa fi booda Ciqilee,jilba, quba
c. piivooti kallatti tokkon -ofirra naann’uu Morma,ulnaa,raadiyeesii
d. Foqoqoo (gliding joints) kallatti tokkon -duraa fi duubatti Barruu ,gulubii
2.10 Sirna Maashaa Namaa
Dameen anaatoomii kan waa’ee lafee qoratu miiyoloojii (myology) jedhama. Tishuun maashaa seelota dhedheeroo faayiberoota maashaa jedhaman irraa kan ijaaramanii dha. Baayyen maashaa lafeetti kan qabatanii jiranii dha. Maashaan dalagaa hedduu qaba: sochiif (locomotion), tasgabiif (stability), walquunnamtiif (communication), ballachuu fi dhiphachuu ujummowwanii fii ho’a qaamaa to’achuu tiif ta’a. Amaloonni addaa maashaa – deebii kennuu (responsive) ,kontonfachuu, diriiruu, fi iddootti deebi’uu (elasticity) dha.
2.10.1 Akaakuu Marshalee
Nama keessa maashaa gosa sadiitu jiru. Isaanis: Marshalee lafee (skeletal muscles). Marshalee lallaafoo ( Smooth muscles ) fi maashaalee onnee ( cardiac Muscles ) ta’u.
Maashaaleen lafee to’annaa sammuutiin yommuu dalagaa isaanii raawwatan warren kaan garuu to’annaa sammuu ala dalagu (involuntary muscles). Kanaaf, Maashaaleen lafee maashaalee fedhii (voluntary muscles) yommuu jedhaman marshalee lallaafoo fi maashaalee onnee maashaalee fedhii maleeyyii (involuntary muscles) jedhamu. Marshalee lallaafoo fi maashaalee onnee iddoo tokkottii maashaalee Keessoo (Visceral muscles) jedhamu.
Caasaa fi amala maashaalee lafee
Maashaaleen kun seelota faayiberoota dhedheeroo niwukileessii hedduu qaban irraa kan ijaaramanii fi ribuudhaan ( tendon) lafeetti kan hidhamanii jiranii dha.
Seelonni kun filaamentoota pirootina aktinii fi miyoosinii irraa tolfaman qabu .
Filaamentoonni kun wal-qaxxaamuroo (striated muscles ) fi membireenii sarkooleemaa jedhamuun kan marfamanii dha.
Dafanii kottonfatu, dafanii dadhabu
B. Dalagaa Maashalee lafee
Lafeen socho’uudhaaf maashaalee masanuu ta’an lama barabaada. Maashhaan inni tokko yeroo kottonfatu lafeen kallattii ta’e tokkoon socho’a, maashaan inni hafe yeroo kottonfatu immoo lafeen kun kalatttii faallaattiin socho’a. Fkn: lafeen harkaa maashalee masaanuu ta’an lama qaba: Baayiseepsii- maashaa hirree gara duraa fi tiraayiseepsii-maashaa hirree gara boodaa. Tooftaan dalaga isaanis;
Baayiseepsiin yeroo kottonfatu tiraayiseepsiin ni diriira, yeroo kana lafeen harkaa inni duraa akka ol-ka’u taasisa. ( (bi =2 tendos) (tri =3 tendos)).
Baayiseepsiin yeroo diriiru tiraayiseepsiin ni kottonfa, yeroo kana lafeen harkaa inni duraa akka diriiru godha.
Marshalee lallaafoo (smooth muscles, Visceral muscles)
Dhaabaa keessoo daandii soorataa, ujummoo dhiigaa uwwisee argama .
Seelota faayibarii sirriitti mul’atanii fi niwukilees-tokkee qabu.
Faayibarootni kun wal-qaxxaamuranii hin jiran ( unstriated )
Dadhabina malee yeroo hundaa hojjetu
Maashaa onnee (Cardiac muscles)
Seelonni maashaa onnee gagabaabo miyoositii (myocytes) jedhamanii dha.
Dhaaba onnee qofa keessatti argama.
Miyoosiitoonni wal-qaxxaamuranii argaamu, akkasumas birkii isaaniidhaan wal-xaxauun saaphana uumu.